My World: June 2013
“ငွေ” ဆန့်ကျင်ဘက်တို့ တွန်းတိုက်ထိခိုက်ကြတဲ့အခါ
Posted by PhyoPhyo at Sunday, June 30, 2013 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
ကိုယ်တို့တွေ့ဆုံဆက်နွယ်မှု ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးစရာတွေနဲ့ စတင်လာပြီးတဲ့အခါ နှစ်ယောက်တစ်ဘဝလေးကို ပုံဖော်ဖန်တီးကြမှာပါပဲ။ ဘာတွေကများ ကိုယ်တွေးထင်တာတွေနဲ့ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေနိုင်မှာလဲ။ ငွေကြေးပိုပိုပြီး စုဆောင်းမိလာတာဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေပိုပိုပြီး စုဆောင်းမိလာတယ်လို့တော့ ညီမျှခြင်းချလို့မရနိုင်ပါဘူး။ အနာဂတ်ကို ပန်းချီကားတစ်ချပ်နဲ့ ပုံဖော်မယ်ဆိုပါစို့။ ကျယ်ဝန်းတဲ့ဘောင်ကျယ်ကျယ်ခတ်ရမယ်။ အများကြီးပဲ ကြိုတင်တွေးထားရတော့မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဝတ်ပန်းချီကား အလှပဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့က အတွင်းမှာ အသွေးအရောင်စိုစို၊ ဟိုမှာသည်မှာကွက်လပ်တွေ မရှိနိုင်အောင်လည်းအစစအရာရာ ဖြည့်တင်းရဦးမယ်။ အဲဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေကြေးအတွက် တာဝန်ယူနိုင်ရမှာပေါ့။ ငွေ ငွေကြေးစုဆောင်းထားနိုင်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်။ ငွေ အမြဲလည်ပတ်စီးဆင်းအောင်တတ်ကျွမ်းနေမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းနိုင်ဦးမယ်။ ဒါမှလည်း “သူနဲ့ ကိုယ့်မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ဆက်နွယ်မှုရရှိနိုင်မယ်” လို့ပဲ သူသူငါငါ တွေးထင်ထားကြမှာပါ။ တကယ်တမ်းတော့ အဲဒါဟာ အဓိကပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ငွေကြေးရိုက်ခတ်မှုအပေါ်ကိုယ့်မြင်ထားတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ စုံတွဲလေးတွေအတွက် မှတ်ချက်တွေပေးမိမလား။ ကြီးကျယ်တဲ့ပစ္စည်း အိမ်လိုမျိုး၊ ပြီးတော့ ကားအမျိုးစား၊ ကိုယ်သောက်တဲ့ကော်ဖီ နဲ့ အမြဲတမ်းစီးတတ်တဲ့ အမျိုးအစားကောင်းကောင်းရှုးဖိနပ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပျော်ရွှင်မှု၊ ခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲတွေကို စဉ်းစားနေမိမှာလား။ အဲဒီအရာတွေက ကိုယ်တို့ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနေလဲ။ ဒီမှာ ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်ပါဦး။ အိမ်ထောင်ရှင်ခင်ပွန်းတစ်ဦးက ဇနီးကို “ငွေနာဇီမ” လို့ ခေါ်လိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်များလဲ။ သူတံခါးကိုဖြတ်ပြီး လျှောက်လမ်းလာတဲ့အချိန်လေး သူတို့ အပြန်အလှန်ပြောဖြစ်ကြတဲ့ စကားတွေက ဒီလိုပါ။
ဇနီး - ရှင် နေ့လည်စာ ဘယ်မှာစားခဲ့လဲ။
ခင်ပွန်း - ငါတို့ ဒီနေ့ အီတလီအစားအစာသွားစားကြတယ်။
ဇနီး - ရှင် ဘာစားခဲ့လဲ။
ခင်ပွန်း - ကြက်ကရင်မ်ဆလတ်စားတယ်။
ဇနီး - ဘယ်လောက်ကုန်လဲရှင့်။
ခင်ပွန်း - ငါ မသိဘူးကွာ၊ ၁၃ ဒေါ်လာလောက်ဖြစ်မှာပေါ့။
ဇနီး - ဟင် ကြက်သား၊ ပေါင်မုန့်ကင်ပါတဲ့ ကရင်မ်ဆလတ်တစ်ပွဲအတွက် ၁၃ ဒေါ်လာလောက် ? ဘုရားရေ၊ ရှင် ရူးများနေသလား။
ဒီလိုအငြင်းအခုန်မျိုး ရင်းနှီးနေတယ်ဆိုရင်၊ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်တတ်တာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ romantic ဆန်တဲ့ သံယောဇဉ်အနှောင်အဖွဲ့လေး ခိုင်မြဲချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ အချက်လေးတွေက ပြဿာနာကောင်လေးတွေမို့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
၁. သင့်ရဲ့ ငွေကြိုက်တဲ့ဗီဇ
ငွေမှာတော့ ဗီဇမျိုးရိုးမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီငွေကိုပဲ ကျွန်မတို့ ကြည့်မြင် ခံစားမှုမှာတော့ ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းက ဘယ်လောက်များ အရိုးစွဲလာလိုက်သလဲဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေရဲ့ အရောင်အသွေးအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်လောက်တဲ့အထိပါပဲ။ ငွေ နဲ့ပဲ မွေးဖွားလာသလိုမျိုးပဲ။ အဲဒါကိုအလွယ်ဆုံးသက်သေပြရရင် ကျွန်မတို့ ကလေးဘဝထဲက ဘယ်လိုကြီးပြင်းခဲ့သလဲကြည့်ပါ။ ကလေးနှစ်ယောက် ကိုးလ် နဲ့ ကိတ်ဒ် ဆိုပါစို့။ သားလေးနှစ်ယောက်မှာ ကိုးလ်က ငွေကို စုဆောင်းသူ၊ ကိတ်ဒ်ကတော့ သုံးဖြုန်းသူပါ။ ကိတ်ဒ်က သူ့ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ တစ်ဒေါ်လာဆိုတဲ့ငွေကိုတောင် သိမ်းဆည်းမထားနိုင်ဘူး။ ကိုးလ်ကတော့ ကျွန်မတို့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် အားပေးရင်တောင်မှ အဲဒီ တစ်ဒေါ်လာလေးကို မသုံးရက်ဘူး။ အဲဒီနည်းလမ်းဟာ လူကြီးတွေမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ လူကြီးတွေမှာလည်း ငွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗီဇတွေရှိနေကြတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ အထုံဝါသနာကပဲ အကောင်းဆုံးလို့ ယုံကြည်နေကြသေးတယ်။ ငွေ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေကိုယ့်မှာဘယ်လိုရှိမလဲ နားလည်လွယ်အောင် ခွဲခြားကြည့်ရအောင်ပါ။ ငွေစုဆောင်းသူ၊ ငွေသုံးစွဲသူ၊ စွန့်စားရင်းနှီးလိုသူ၊ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နည်းနဲ့ပဲရှာဖွေလိုသူ၊ ငွေကို တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ လွှင့်ပြစ်သုံးစွဲနေသူ ဆိုပြီး အဲဒီလို ဗီဇရှိသူတွေတွေ့ကြရမှာပါ။ အဲဒီအထဲမှာမှ တစ်ဦးစီဟာ ပထမ နဲ့ ဒုတိယ အမျိုးအစားပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ ချစ်ခင်သူနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုဗီဇရှိနေမလဲ ကွဲပြားချက်တွေ ခွဲခြားသိရှိထားဖို့ပါ။ သိရှိပြီးပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗီဇအကျင့်လေးတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ကြရမှာပါ။
၂. သင့်ရဲ့ မှန်ဘီလူး
ကျွန်မတို့ဟာ မှန်ဘီလူးတစ်ခုနဲ့ ကြည့်ပြီး ငွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်နေကြတယ်။ ဆွယ်တာဒီဇိုင်းအသစ်လေးတစ်ထည် ဆိုင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုပါစို့။ အဲဒီလို အသစ်အဆန်းလေးတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး ၃၀ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ကို ဆွဲယူသွားစေဖို့ တွန်းအားပါပဲ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ကြဖို့လည်းဆုံးဖြတ်တယ်။ ငွေဟာ ကျွန်မတို့ ပြုလုပ်သမျှဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ အမြဲယှဉ်တွဲပါနေတတ်တာပါ။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဇကပဲ ကျွန်မတို့ဘဝအပေါ်မြင်တဲ့ ရှုထောင့်ကို ပုံဖော်ဘောင်ခတ်ပေးတယ်။ ဥပမာတချို့ဆိုရင်တော့ ငွေသုံးစွဲသူတွေဟာ လှူဒါန်းပေးကမ်းဖို့ ဝါသနာပါသူပါ။ စုဆောင်းသူတွေဟာ အကောင်းဆုံးအပေးအယူကို ရှာဖွေပါတယ်။ စွန့်စားရင်းနှီးလိုသူတွေက “အဲဒါကို စမ်းကြည့်မယ်”လို့ ဆုံးဖြတ်မှာပဲ။ လုံခြုံစိတ်ချရမယ့်နည်းရှာဖွေသူတွေကတော့ ကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေလုပ်နေမယ်။ ငွေကို လွှင့်ပြစ်သလိုသုံးစွဲတတ်သူကတော့ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ ဘယ်တော့မှ နှောင့်နှေးနေမှာမဟုတ်ဘူး။
၃. သင့်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် (money opposite)
“ကူညီပါ၊ ကိုယ်တော့ တကယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်၊ ဗီဇမတူသူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါပြီ” ကျွန်မတို့ ခရီးတွေသွားတယ်။ နိုင်ငံအနှံ့အပြားက လူတွေနဲ့ စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ များလှတဲ့စုံတွဲတွေမှာ ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုတွေ၊ ချောက်ချားထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ စုံတွဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သူတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ငွေဗီဇမတူသူတွေနဲ့ လက်ထပ်ထားကြတယ်။ အံ့သြစရာတော့မရှိပါဘူးတဲ့။ ကွာရှင်းခဲ့ကြတဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးဟာ ငွေ ကြောင့်ပါပဲ။ ငွေဟာ သူတို့ ကွဲကွာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုမှာ ဗီဇခြင်းမတူတဲ့(money opposite) တွေလက်ထပ်ထားရင်တော့ ကွာရှင်းပြတ်စဲတာမျိုးတွေမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ တဘက်မှာ ငွေစုဆောင်းသူနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နည်းနဲ့ပဲရှာဖွေလိုသူတွေရှိမယ်။ တခြားဘက်မှာ သုံးစွဲသူတွေ၊ စွန့်စားမှုရယူလိုသူ၊ ငွေကို လေအနှင်နဲ့အတူသုံးစွဲသူတွေရှိကြတယ်။ ကျွန်မတို့ နာမည်ပေးထားသလို “ဆန့်ကျင့်ဘက်အပြင်းစားဗီဇ” ရှိနေကြမလား။
အဲဒီလိုအပြင်းစား ကွာခြားချက်တွေဟာ သံယောဇဉ်တွေပြတ်တောက်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်က သုံးစွဲသူဆို ကိုယ်က စုဆောင်းသူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခိုင်မြဲတဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုစီ ဦးတည်ရှေ့ဆက်နိုင်ကြမှာပါ။ ။
Yati Magazine, July, 2013
Posted by PhyoPhyo at Friday, June 28, 2013 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
၁. စီးကရက်ကုမ္ပဏီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် ဘရူနိုမားစ်
ရက်ဂေး၊ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းသားတို့ရဲ့ ဂီတမျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ချစ်စရာသီချင်းချိုချိုThe Lazy Song ကို သီဆိုခဲ့တဲ့ ဘရူနိုမားစ်ရဲ့ ဟန်ပါပါစီးကရက်ခဲထားတဲ့ပုံနဲ့အတူ မားစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်လုပ်ငန်းသစ်အကြောင်း သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာပါတယ်။ Grenade ဆိုတဲ့လွမ်းစရာသီချင်းအဆိုတော်လေးဟာ သူ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမယ့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်။ ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ တကယ့်စီးကရက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အီလက်ထရောနစ် စီးကရက်(e-cigarette) ကုမ္ပဏီ NJOY မှာ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှာပါ။ အဲဒီ NJOY က ထုတ်လုပ်တဲ့ အီး-စီးကရက်အရသာကို မြည်းစမ်းပြီးတဲ့အခါ သူ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ NJOY စီးကရက်ဟာ နီကိုတင်းဓာတ်မြင့်တက်မှုကို မပါသလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ စီးကရက်အခိုးအငွေ့တွေရဲ့ရန်က ကင်းဝေးစေပါတယ်တဲ့။ ယူအက်စ် FDA က NJOY နဲ့ Smoking Everywhere ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကထုတ်လုပ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်အမျိုးအစား ၁၉ မျိုးခန့်ကို စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ Smoking Everywhere က ထုတ်လုပ်တဲ့ စီးကရက်တွေရဲ့ cartridge အိမ်ထဲမှာတော့ ဒီသိုင်လင်းဂလိုင်ဂေါ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ ဟိုက်ဂရိုစကော့ပစ် အရည်တစ်မျိုးထည့်သွင်း အသုံးပြုထားတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အီး-စီးကရက်တွေကို နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးအဖြစ်၊ ဆေးတစ်မျိုးအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ FDA က ထောက်ခံထားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၂ စစ်တမ်းအရ အီး-စီးကရက်တွေဟာ သမားရိုးကျစီးကရက်တွေထက်ပိုပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရတယ်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းစွဲလမ်းနေတဲ့အကျင့်ကို ရပ်တန့်စေနိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ ဆိုတယ်။ အီး-စီးကရက်ရဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းအဆင့်ဟာ ပုံမှန်စီးကရက်တွေထက် အကြိမ် ၁၀၀၀ လျော့နည်းပါတယ် တဲ့။ အီး-စီးကရက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ အရည်မှာ အသီးအရွက်အလှဆီ(VG) ဒါမှမဟုတ် ပရိုပိုင်လင်းဂလိုင်ဂေါ(PG) နဲ့ ပုံမှန်ဆေးရွက်ကြီး၊ ပရုပ်၊ ဗီနီလာ၊ ကော်ဖီ၊ ကိုလာ နဲ့ တခြား အသီးအနံ့အရသာအရောအနှော ပါဝင်တယ်။ ဘရူနိုမားစ်က ပြောပါတယ်။ “ကျွန်တော် ဒီရက်တွေမှာ NJOY ကို သမားရိုးကျစီးကရက်တွေအစား အသုံးပြုနေပါပြီ။ အဲဒါကို သဘောကျနေပြီ။ ဒီပစ္စည်းနဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ယုံကြည်ပါတယ်” တဲ့။ Twitter မှာလည်း “ပထမဆုံးနေ့ အီး-စီးကရက်ပါ။ ဒါကို အသုံးပြုရမယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ မိခင်အတွက်” လို့ ဟိုနိုလူလူဖွား ဟာဝိုင်အီကျွန်းသားအဆိုတော်လေးက ရေးသားခဲ့တယ်။
၂. မျက်နှာထားဆိုးပေမယ့် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်စတားဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အရင်ကတော့ တာဒါဆော့စ် လို့ အမည်ရှိခဲ့ပြီး အခုနာမည်သစ်“မျက်နှာထားဆိုးတဲ့ကြောင်(Grumpy Cat)”နဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကြောင်မလေးဟာ အနီးကပ်ရိုက်ချက်တွေအတွက် အသင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ တာဒါဟာ လူမှုကွန်ယက်ဆိုက်တွေဖြစ်တဲ့ Instagram ၊ Twitter ၊ YouTube နဲ့ TV အစီအစဉ်တွေမှာ နာမည်ကြီးနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အနီးကပ်ရိုက်ချက်တွေတော့ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ အခု တာဒါလေးကို အနီးကပ်ပိုပြီး ကြီးကြီးမားမားမြင်ရပါတော့မယ်။ မျက်နှာထားခပ်ဆိုးဆိုး တာဒါ ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တာကြောင့်ပါ။ International Academy of Digital Arts and Sciences ကစီစဉ်တဲ့ The Webby Awards ရဲ့ ၂၀၁၃ Meme of the Year ဆုကို ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ Garfield လို ရုပ်ရှင်မျိုးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Broken Road ထုတ်လုပ်ရေးက ရိုက်ကူးမှာပါ။ တာဒါအတွက် စီစဉ်ထားကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတချို့ရှိနေပါတယ်။ အာကာသစကြာဝဌာအဖွဲ့အစည်း က ငယ်ရွယ်တဲ့ စစ်သမီးလေး တာဒါဟာ အာကာသမင်းသားလေး မာရူးနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်တဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုး၊ A Buddy-Cop မှာ စစ်ပြန်ရဲကြီးအဖြစ်၊ A Grinch who stole Christmas Remake မှာ အမြဲမှုံတေတေ၊ အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ကြောင်မလေး၊ အဖွားက စွန့်ပစ်သွားလည်း ဂရုမစိုက်တဲ့စရိုက်မျိုး၊ suburban drama ရုပ်ရှင်တစ်ကားမှာတော့ ရိုးအီနေတဲ့နောင်တတွေနဲ့ မကျေမနမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မုန်းတီးနေတဲ့ကြောင်မလေးအဖြစ်၊ စတားဝါးဇာတ်လမ်းတွဲ Dark side လို ဇာတ်လမ်းမျိုး၊ အာကာစွန့်စားခန်းတွေနဲ့ အာကာသယာဉ်မှုးလို ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေရိုက်ကူးကြဖို့ အကြံပြုထားကြတယ်။ Here Comes the Boom နဲ့ Zookeeper သရုပ်ဆောင် ကီဗင်ဂျိမ်းစ်ကလည်း တာဒါ နဲ့ အတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
၃. အိပ်မက်ထဲက ဘဝကိုပြန်ပေးလိုတဲ့ ဂီတညထဲကဂီတသမားတွေ
မေလ ၂၀ ရက်နေ့က ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ အိုကလားဟိုးမားမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ လေဆင်နှာမောင်းကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသူတွေကို ကယ်ဆယ်လှူတန်းနိုင်မယ့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခု မေလ ၂၉ ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိုကလားဟိုးမား ဇာတိ အမေရိကန် ကန်းထရီးအဆိုတော် ဘလိတ်ခ်ရှဲလ်တန်ကဦးဆောင်ပြီး စတားတွေ ခပ်များများပါဝင်သီဆိုခဲ့ကြတယ်။ ဂီတပွဲကို “Healing in the Heartland” လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ အိုကလားဟိုးမားစီတီးရဲ့ Chesapeake Energy ကွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ NBC ကနေလည်း ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တယ်။ The Voice သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ နည်းပြလည်းဖြစ်တဲ့ ရှဲလ်တန် နဲ့ အတူ အိုကီးစ်ဗင်စ့်ဂေးလ်၊ ရီဘာမက်အန်တိုင်းရား နဲ့ အမေရိကန် ပေါပ့် ရောခ့်အဖွဲ့ OneRepublic အဖွဲ့သား ရိုင်ယန်တက်ဒါ၊ အာရှာ၊ လုခ်ဘရိုင်ယန်၊ ဒရိုင်းယပ်စ်ရာ့ခ်ကာ၊ ရာစ့်စကဲလ်ဖလက်ထ်စ် နဲ့ ရှဲလ်တန်ရဲ့ ဇနီးသည် ကန်းထရီးအဆိုတော် မရန်းဒါလမ်းဘတ်ထ် တို့ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ အားလုံး ကိုယ်စီစိတ်နှလုံးနှစ်မြှုပ်သီဆိုခဲ့ကြသလို The House that built Me သီချင်းကို သီဆိုနေခဲ့တဲ့ လမ်းဘတ်ထ်ဟာ သီချင်းတစ်ဝက်လောက်မှာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆို့နင့်လာခဲ့တယ်။ ပရိတ်သတ်တွေပါ ထပ်တူခံစားခဲ့မိတဲ့ ဂီတညပါပဲ။ “အစီအစဉ်တွေတော့ ရေးဆွဲထားခဲ့ပါပြီ။ ကွန်ကရစ်တွေ လောင်းချခဲ့ပြီ၊ သံတွေတစ်ချောင်းစီ တစ်ချောင်းချင်းစီရိုက်သွင်း၊ နံရံတွေ တစ်ချပ်ချင်းစီ၊ ဒက်ဒီ က မာမီ့အိမ်မက်ထဲက ဘဝကို ပေးခဲ့ပါပြီ” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားတွေမှာ ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံး သီချင်းနဲ့အတူ စီးမြောပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ လေဆင်နှာမောင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသူတွေကို ဂရုဏာသက်စွာငြိမ်သက်သွားကြတယ်။ ရှဲလ်တန်ကပြောပါတယ်။ “အိုကလာဟိုးမားနဲ့ တခြားနေရာက အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေ ဒီည ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေကြတာက ဘေးဒုက္ခအလွန်ပြဿနာတွေနဲ့ လက်တွဲဖို့ပါ။ အိုးအိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့ နဲ့ ဒီနေရာဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက်အဓိပ္ပါယ်အများကြီး ပြည့်ဝသွားစေပါတယ်” တဲ့။ ရှဲလ်တန်ရဲ့ ဂီတပွဲဟာ အလှူငွေ ဒေါ်လာ ၆ သန်းစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဘလိတ်ခ်ရှဲလ်တန်ဟာ ဒေါ်လာ ၆ သန်းတန်လူသားဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ လို့ မိတ်ဆွေတွေက ချစ်ခင်စွာ စနောက်ခဲ့ကြတယ်။ အိုကလားဟိုးမားစီးတီးမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ လေဆင်နှာမောင်းဟာ တစ်နာရီကို မိုင် ၂၁၀ နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ကလေးငယ် ၉ ဦးအပါအဝင် လူပေါင်း ၂၄ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ၃၇၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်။
၄. ပန်းသွေးရောင်လည်ရှည်ဖိနပ်နဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဂျနီဗာလိုပက်ဇ်ရဲ့ဖက်ရှင်
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ဟာ ရက်ပ်ဂီတသမား “Pitbull” feature ပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ စင်ဂဲလ်သီချင်းသစ် Live it Up ကြော်ငြာအတွက် လန်ဒန် ဘီဘီစီရေဒီယိုဝမ်း စတူဒီယိုကို ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ ရွှင်မြူးသွက်လက်ပေါ့ပါးလှတဲ့ဟန်ပန်နဲ့ပါ။ ဂျေလိုဝတ်ဆင်ထားတာက J brand အသားကပ်ဂျင်းအပြာနုနုအသွေး၊ Stark အိတ်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ၊ လိုက်ဖက်လှတဲ့ Beck & Bridge အဖြူလွလွ ဘလေဇာကုတ်လေး ဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့် သူမရဲ့ နွေရာသီစတိုင်လ်ဟာ ပြည့်စုံလှပသွားစေတယ်။ ချစ်စဖွယ် ထူးထူးခြားခြားလှပသွားစေတာက Christian Louboutins တံဆိပ် ပန်းရောင်အသွေးနုနု လည်ရှည်ဖိနပ်ကြောင့်ပါပဲ။ ခြေချောင်းတွေဖွင့်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ငွေရောင်သံမှိုတွေ အပြည့်ပါရှိတယ်။ အဲဒီနေ့က ဓါတ်ပုံတွေမှာ နှင်းဆီသွေးအနီအသွင်အပြင် တောက်တောက်ပပတွေ့မြင်ခဲ့ရပေမယ့် တကယ်က ပန်းရောင်ပါလို့ ဂျေလိုရဲ့ ဒီဇိုင်းဖန်တီးပေးသူ ရော့ဒ်ဇန်ဂါဒီက ပြောပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းအရောင်ကိုလည်း ပန်းနုရောင်အသွေးတူဆိုးထားခဲ့တာရယ်၊ ရွှေရောင်ဆံနွယ်တွေကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာဖြန့်ချထားတာကလည်း ပိုပြီး နုပျိူသွားစေတဲ့နွေရာသီစတိုင်လ်လေးပါပဲ။ အဲဒီ Christian Louboutins ဘုဒ်ဟာ ဒေါ်လာ ၁၉၉၅ခန့် တန်ကြေးရှိပါတယ်။ လတ်တလော Britain’s Got Talent မှာ ဂျေလို ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီဇိုင်းဟာမိသားစုအစီအစဉ်အတွက် မသင့်တော်ဘူး။ အနည်းငယ် တိုကပ်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်။ ရုပ်သံလွှင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်း Ofcom ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
၅. နည်းပညာထဲက အနုပညာ အာရုံထွေပြားဖို့ မဟုတ်ပါ
ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ သုံးစွဲလိုက်တဲ့ Cleveland Museum of Art ရဲ့အနုပညာ နဲ့ နည်းပညာ အရောအနှောပြပွဲဟာ ပရိတ်အမျိုးအစားအသစ်တွေကိုပါ ဆွဲဆောင်လိုက်တာပါ။ နည်းပညာကို အသုံးချပြီး ဖန်တီးထားပေမယ့် ရိုးရာပြခန်းအဆောင်အယောင်၊ ရိုးရာအနုပညာရသ ဆုတ်ယုတ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ “ပြတိုက်တိုင်းက ဒီလို နည်းပညာနဲ့ အနုပညာအရောအနှောကို ရှာဖွေလာကြပါလိမ့်မယ်” လို့ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ အိုဟိုင်းယိုးဒေသက ကလိဗ်လန်းဒ်အနုပညာပြတိုက် ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေးဗစ် ဖရန်ကလင်ကပြောပါတယ်။ ပြတိုက်ရဲ့ မြေညီထပ်ပြခန်းမှာ touch screen တွေတပ်ဆင်ထားပြီး ပန်းချီကားတွေနဲ့ ပန်းပုရုပ်တွေကို interactive အရသာနဲ့ ခံစားနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတယ်။ ပြတိုက်ရဲ့ ဒါရိုက်တာက ပြိုင်ဘက်ပြတိုက်တွေက အမှုဆောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါ အလည်အပတ်ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ “ပုံတူကူးချ/ အတုယူ ဒါတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့လည်းကြိုဆိုပါတယ်” လို့ ဒါရိုက်တာက ဆိုတယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ ပြတိုက်ကမ္ဘာထဲမှာတော့ ပြတိုက်တိုင်း ကလိဗ်လန်းဒ်ရဲ့ ပြပွဲကို ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ J.Paul Getty Museum နဲ့ Metropolitan Museum of Art ပြတိုက်နှစ်ခုလုံးရဲ့ အကြံပေး အဲရင်ကိုဘန်က “တခြားပြတိုက်တွေလည်း interactive နည်းပညာတွေနဲ့ အနုပညာပြပွဲတွေပြုလုပ်ပြသကြတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလိဗ်လန်းဒ် ရဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ တကယ့်မကြုံစဖုးပဲ” လို့ ဆိုတယ်။ မစ္စတာ ဖရန်ကလင်ဟာ ပေ ၄၀ ကျယ်တဲ့ touch screen ရှေ့မှာ ရပ်နေတယ်။ အဲဒီ screen မှာ ဖိတ်စာကတ်အရွယ်အစားပုံရိပ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ရှိနေပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူက ပုံရိပ်တစ်ခုကို ထိကိုင်လိုက်တာနဲ့၊ စကရင်ဟာ ပုံကြီးချဲ့ပေါ်လာပြီး ဘေးမှာတော့ အမျိုးအစားတူပုံရိပ်တွေက အသီးသီးနေရာဝင်ယူလိုက်ကြမှာပါ။ အဲဒီ ပုံရိပ်ရဲ့ တကယ့်ပန်းချီကားနေရာ၊ အရွယ်အစားအချက်အလက်တွေ အားလုံးဖတ်ရှုနိုင်ပါမယ်။ အဲဒီကမှ ပုံရိပ်တစ်ခုရဲ့ ထောင့်နားမှာရှိတဲ့ အသည်းပုံသဏ္ဍန် icon လေးကို ထိလိုက်တာနဲ့ ကြည့်ရှုသူဟာ နံရံပေါ်က ရွေးလိုက်တဲ့ပန်းချီကားကို ကိုယ့်ရဲ့ လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ iPad မှာ ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ ပြတိုက်မှာ iPad ကို တစ်ရက်စာ ၅ ဒေါ်လာနဲ့ ဌားရမ်းနိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် iPad နဲ့လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ကြတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ ပြတိုက်အတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုမယ့် ခရီးအစီအစဉ်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဆန်းဆန်းပေးထားနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတိုင်း တခြားဧည့်သည်တွေကလည်း လိုက်ကြည့်နိုင်ကြသေးတယ်။ ဧည့်သည် အယောက် ၂၀၀ ကျော်ခန့်ဟာ ကိုယ်ပိုင် ခရီးစဉ်ရေးဆွဲပြီး လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြတယ်လို့ မစ္စတာ ဖရန်ကလင်က ပြောပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူတွေအတွက် ပြခန်းအညွှန်းစာအုပ်တကိုင်ကိုင်နဲ့ လျှောက်ကြည့်စရာမလိုကြတော့ဘူးပေါ့။ Turner Prize ဆုရ land artist လို့ နာမည်ကျော်တဲ့ Richar Long ရဲ့ ပန်းပု Cornwall Circle ကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ iPad မှာ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တစ်မိနစ်စာ အဲဒီပန်းပုရဲ့ အချက်အလက် အားလုံးဘက်ပေါင်းစုံကပုံတွေပါ ပြသသွားမှာပါ။ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရှေ့ကို ရောက်တဲ့အခါ၊ အဲဒီပန်းချီကားကို iPad နဲ့ ဖမ်းယူကြည့်ရှုလိုက်တာနဲ့လည်း ပန်းချီကားမှာပါဝင်တဲ့ အချက်အလက် ရုပ်ပုံ၊ ဆေးအမျိုးအစား၊ အားလုံးကို iPad မှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ Cleveland Museum of Art မှာ ပြသထားတဲ့ ပြပွဲတွေထဲက Tantra in Buddhist Art ပြပွဲကို မေလ ၅ ရက် နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့အထိ၊ The Last Days of Pompeii: Decadence, Apocalypse, Resurrection ပြပွဲကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄ ရက်ကနေ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့အထိ ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပါ။
၆. အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ်ဒီဇိုင်းသစ် ကို ၂၀၁၄ ဆောင်းရာသီပွဲတွေမှာ စတင်အသုံးပြုလိမ့်မယ်
နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဟာ ရုရှားနိုင်ငံ စိန့်ပီတာစဘာ့ဂ်မြို့မှာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး လာမယ့် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ စတင်အသုံးပြုမယ့် ဆုတံဆိပ်အသစ်တွေကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအားကစားပွဲတွေကို ရုရှားနိုင်ငံ Krasnodar Krai ပြည်နယ်၊ မြို့တော် Sochi မှာ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာပါ။ လည်ဆွဲအသစ်အတွက် အဆောင်အယောင် ဆုတံဆိပ်ဒီဇိုင်းကိုတော့ ရုရှားနိုင်ငံဒေသတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးကို ကိုယ်စားပြုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ ရေမြေတောတောင်သဘာဝအမျိုးမျိုး၊ တောင်တန်းတွေ၊ ကမ်းခြေတွေကို ထုပုံ(ပရစ်ဇင်)ပုံနဲ့ ပုံဖော်ထားပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက် ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ဆုတံဆိပ်ပေါင်း ၁၃၀၀ ပြုလုပ်ထားတယ်။ ကစားနည်း ၁၂ မျိုးခန့် အသစ်ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုတယ်။ ၂၀၁၄ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ တရားဝင်အမည်ကို ဆုတံဆိပ်တွေရဲ့ အနားသပ်လိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်၊ ရုရှား နဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာသုံးမျိုးနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။ ကျောဘက်မှာ ပြိုင်ပွဲကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပြီး Sochi မြို့တံဆိပ်ပုံ ပါရှိတယ်။ ဆုတံဆိပ်တွေရဲ့ ဒီဇိုင်းကို Leo Burnett ကြော်ငြာအေဂျင်စီက ရုရှားဒီဇိုင်းသမားတွေ ဖန်တီးရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်။ ပထမဆုံး ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ Chamonix မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒီဇိုင်းက Raoul Bernar ရဲ့ လက်ရာပါ။ နှင်းလျှောစီးသူတစ်ဦးက ရေခဲပြင်စကိတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ပုံပါ။ ပထမဆုံး နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ ၁၈၉၆ က ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ နှင်တံကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဇုနတ်မင်းကြီးပုံဖြစ်ပြီး ကျောဘက်မှာတော့ အေသင်က အေခရိုပိုလစ်ခံတပ်အဆောက်အဦးပုံပါ။ ဒီဇိုင်းပညာရှင်က Jules-Clément Chaplain ဖြစ်ပါတယ်။ ။
(ရတီမဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၃)
ဘာကိုမှ အသေ ဆုပ်မထားသူ
Posted by PhyoPhyo at Thursday, June 27, 2013 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ
သူ့နာမည် ခင်ဇော်လတ်။ အဖဦးသိန်းဟန် ၊ အမိ ဒေါ်သန်းသန်းတို့က သူ့ကို ၁၉၈၀မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမ ခြောက်ယောက်မှာ သူက အငယ်ဆုံး။ အစ်ကို ကလည်း စိုးစိုး(လပွတ္တာ)ဆိုတဲ့အနုပညာအမည်နဲ့ ပန်းချီလောကမှာ ရှင်သန်နေတဲ့သူ။ အခု အမှတ် ၁၈၄။ /၈၄ (အေ) ၊ သံလွင်လမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား ၂ မှာသူနေတယ်။ အဲဒီမှာပဲ KZL gallery ဖွင့်ထားတယ်။ သူပြောပြတဲ့ ပန်းချီခင်ဇော်လတ်ရဲ့ ကောက်ကြောင်းတချို့က ဒီလို…။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းစာအုပ်ထဲ အရုပ်တွေလျှောက်ဆွဲလွန်းလို့ ဆရာမဆူတာ ခဏခဏခံရတယ်။ ဆယ်တန်ုးမှာ အစ်ကို (ပန်းချီစိုးစိုး) ကရန်ကုန်ခေါ်ပြီး ကျောင်းထားပေးတယ်။ အဲဒီမှာ သူ့ပန်းချီကားတွေ ကြည့်ခွင့်၊ တခြားပန်းချီဆရာတွေရဲ့ ပန်းချီစာအုပ်တွေ ဖတ်ခွင့်ရသလို ပန်းချီကို ပိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ ဆယ်တန်းမအောင်မချင်း ပန်းချီမဆွဲရဘူးလို့ အစ်ကိုကအမိန့်ထုတ် ထားလို့ စုတ်တံကိုင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ဆယ်တန်းဖြေပြီးတာနဲ့ စုတ်တံကိုပြေးကိုင်တော့တာပဲ။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် တက်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၂မှာကျောင်းဆင်းတယ်။ အစ်ကို့ဆီက ပညာအများကြီးရခဲ့တယ် တက္ကသိုလ်တက်တော့ အခြေခံကျကျ လေ့လာခွင့် ရပြီး ပြပွဲ ၂ပွဲလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ လုပ်ဖြစ်တယ်။ ပန်းချီဆရာဖြစ်ချင်စိတ်ကလည်း တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးပြင်းထန် လာတယ်။ အစ်ကိုက ရှေ့ကရှိနေတော့ အခက်အခဲအကြီးစားတွေမကြုံရဘူး။ စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ ဒါကိုပဲ လုပ်နေရတာကို ကျေနပ်နေတာ။ အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာလည်း မသိဘူး။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ပန်းချီဟန်မှမဟုတ်ဘူး၊ တခြားသူတွေရဲ့လက်ရာတွေလည်း ကြိုက်တာပဲ။ abstract တို့ surrealismတို့၊ performance ,installation တို့လည်းအားပေးတယ်။ ဦစိန်မြင့်(ရွှေချည်ထိုး)ကားတွေလည်း ကြိုက်တယ်။ လောလောဆယ် အမေရိကန်ပန်းချီပညာရှင် Jeff Koons ရဲ့ခေတ်ပြိုင်အနုပညာဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကို ကြိုက်နေတယ်။ နည်းစနစ်အတိအကျတော့ ကျွန်တော့်ပန်းချီကားမှာ တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ medium အားလုံးကြိုက်ပေမဲ့ အသုံးများတာတော့ acrylic ပဲ။ subject လည်း အသေဆုပ်ကိုင်ထားတာ ကျွန်တေ့ာမှာမရှိဘူး။ subject တစ်ခုဖန်တီးပြီး နောက်တစ်ခု ဖန်တီးချင်စိတ်ပေါ်ရင် ထပ်လုပ်လိုက်တာပါပဲ။
ပန်းချီခင်ဇော်လတ်ရဲ့ ကောက်ကြောင်းတချို့ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီးနောက် ၂၁ မေကနေ ၂၂ ဇွန်လအထိ ပြသ ဟောင်ကောင်က Asia Fine Art Galleyမှာ ပြသခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲအကြောင်း၊ ဟောင်ကောင်က ပြပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေနဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှုအကြောင်း သိချင်သေးတယ်။
ဒီပြပွဲမှာ ကျွန်တော် ပန်းချီ ၁၂ကားပြတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ new serie လမ်းပေါ်ကလေးတွေရဲ့ပုံတွေပါ။ သူတို့ဘ၀တွေကို ပုံဖော်ထားတာ။ ပြပွဲလာပရိသတ်ကတော့ အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်။ အရင်ကားတွေထက် ပိုကောင်းတယ်ပြောသလို အရင်ကားတွေပဲ ဆက်ရေးစေချင်သူလည်းရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ရဲ့feedback တွေကို စိတ်ဝင်စားလေ့မရှိဘူး။ ကောင်းတယ်ပြောလို့လည်း ထူးပြီးမ၀မ်းသာမိဘူး၊ မကောင်းဘူးပြောလည်း စိတ်မကောင်းမဖြစ်မိဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်တာပဲကိုး။ စိတ်ဝင်စားမှုပုံစံမှာတော့ ဒီမှာနဲ့ မြန်မာပြည်မှာနဲ့ တော်တော်ကွာတယ်ဗျ။ ဒီမှာက ပြည်သူလူထုအားလုံးက ပန်းချီပြပွဲတွေကို တကူးတကန့်အချိန်ပေးပြီး ကြည့်ရကောင်းမှန်းသိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ပြပွဲတစ်ပွဲပြပြီဆိုရင် ခံစားကြည့်ရှုဖို့ဦးတည်လာသူ ပန်းချီပရိသတ်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် ပန်းချီဆရာတွေနဲ့ ပန်းချီကားဝယ်ယူစုဆောင်းသူတွေ ပြီးတော့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေ ဒီလောက်ပဲ လာကြည့်လေ့ ရှိတယ်။ ဒီမှာက ပန်းချီသမားတွေကလည်း ကြိုက်တဲ့ပုံစံ ကြိုက်သလိုရေး၊ ဖန်တီးသမျှ ကြည့်ရှုအားပေးမယ့်သူ ပရိသတ် အများကြီးရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဘုရားကျောင်းကန်၊ ဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်၊ ရှုခင်းလှလှ ဒါမျိုးတွေရေးမှ ပန်းချီကားဖြစ်တယ် လို့ လူအများက လက်ခံနေကြတယ်။ တချို့ဆို မြန်မာပြည်က ပန်းချီကို pagoda art လို့တောင် ခေါ်နေကြတယ်။
၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့KZL galleryမှာ သူနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ပန်းချီဆရာတွေရဲ့ ကားတွေပုံမှန်ခင်းကျင်းပြသ ထားတယ်။ တစ်နှစ်မှာ ပြပွဲ ၄-၅ပွဲ ပြတယ်။ သူ့ရဲ့ KZL gallery အပါအ၀င် မြန်မာပြည် ပြခန်းတွေဟာ စီးပွားရေးသိပ်မတွက်ဘဲ ပန်းချီကားရောင်းရတဲ့အပေါ်မှာ ၂၀%ယူပြီး လည်ပတ်နေကြရတယ်၊ အကျိုးအမြတ်ထက် သူငယ်ချင်းပန်းချီဆရာတွေ ပုံမှန်ဆက်လုပ်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ခါ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေလှူဒါန်းရအောင် Fund Raising Show တွေ လုပ်ကြတယ်လို့ သူပြောပြတယ်။ မျိုးဆက်သစ်ပန်းချီသမားတွေအတွက် ဆရာစွဲမထားဘဲ များများလေ့လာ၊ များများရေးဆွဲကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သလို မြန်မာပြည်ပန်းချီလောကရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို သူမြင်သလောက် ခုလို ပြောပြတယ်။
မြန်မာပြည်ပန်းချီလောကက လက်ရှိမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီကွဲနေတဲ့ pizza လိုဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ အမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင် အ၀ိုင်းတစ်ခုတည်းလိုဖြစ်နေပြီး သေသေချာချာသိရင်တော့ pizza လို အစိတ်လေးတွေ ကွဲနေတယ်။ ပန်းချီရေးတဲ့လူတွေက performance, installation တွေကို အလကား ပန်းချီမရေးတတ်လို့ လွယ်တာလုပ်နေကြတာလို့ ပြောသလို၊ performance သမားတချို့ကလည်း ပန်းချီသမားတွေကို ပိုက်ဆံအတွက်ပဲ ရေးနေကြတာ၊ ခင်ဗျားတို့ ခုထိ canvas ပေါ်ရေးနေကြတုန်း ပဲလား စသဖြင့် အထင်သေးစကား ဆိုတတ်ပြန်တယ်။ ပန်းချီလောကတစ်ခုလုံး တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အားလုံးသင့်မြတ်ပြီး လက်တွဲလုပ်ကိုင် ဖို့ လိုမယ်။ လက်ရှိတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲလေးတစ်ခု ပြောပြချင်တယ်ဗျ။ World Economic Forum နဲ့ YGL(Young Global Leader)အစည်းအဝေးမှာပါတဲ့ လူ ၃၀၀ထဲက အယောက် ၂၀ က ပန်းချီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အစည်းအဝေးတစ်ခုအနေနဲ့ River gallery ရယ်၊ ကျွန်တော့်KZL gallery မှာရယ် လုပ်တယ်။ ပန်းချီဆရာတွေဖိတ်တော့ သူနဲ့ သူနဲ့က အစေးမကပ်ဘူး၊ သူနဲ့သူနဲ့ကတော့ အဆင်မပြေဘူး ဆိုတော့ နှစ်ဖွဲ့ကို သေချာခွဲပြီး နှစ်နေရာစီစဉ်ရတယ်။ အဲဒီလိုအစည်းအဝေးဆို စကားများတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ သူတို့ YGL က ပန်းချီစာအုပ်တွေလှူချင်တယ်တဲ့ ဘယ်မှာထား ရင်ကောင်းမလဲ၊ ပန်းချီဆရာအားလုံးနီးပါး အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်မယ့်နေရာဘယ်မှာရှိမလဲ၊ ပန်းချီပန်းပုကျောင်းလား၊ ပန်းချီပန်းပုကောင်စီလား၊ တခြား gallery တစ်ခုခုလား….။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပန်းချီဆရာတွေအားလုံး ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်တဲ့နေရာ တစ်ခုခုရှိစေချင်တယ်။ ဒီကိစ္စက ဆွေးနွေးရင် အရှည်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူ တခြားတိုင်းပြည်တွေကနေ မြန်မာပန်းချီကို စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး စောင့်ကြည့်နေရာတာတွေလည်း ရှိကြတယ်။ မြန်မာပြည်ပန်းချီလောကကို ဗီယက်နမ်းပန်းချီလောကလို ဖြစ်သွားဦးမယ်ဆိုပြီး စိတ်ပူနေကြတာလည်း ရှိတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ဆန္ဒကတော့ ပန်းချီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ များများရှိလာစေချင်တယ်။ အကျိုးအမြတ်မကြည့်ဘဲ ပန်းချီစာအုပ်စာပေ မဂ္ဂဇင်းတွေ ထုတ်ဝေစေချင်တယ်။ ခု ပန်းချီစာအုပ်ကနည်းတော့ ပန်းချီအကြောင်းမသိ၊ ပန်းချီအကြောင်း မသိ၊ မဖတ်ချင်ကြလို့ ပန်းချီစာအုပ်တွေမထုတ် နဲ့ သံသရာလည်နေတယ်။ သာမန်လူတန်းစားတွေ ပန်းချီအနုပညာကို စိတ်ဝင်စားအောင် စည်းရုံးယူဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ပန်းချီစာအုပ်တွေများများထုတ်ကြစေချင်တယ်။ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလို ပန်းချီပြပွဲတွေကို သေသေချာချာလာကြည့်ကြစေချင်တယ်။
ပန်းချီခင်ဇော်လတ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ပြပွဲ ၃၀ကျော်ပြသခဲ့သလို ပြည်ပမှာလည်း ပြပွဲပေါင်း ၂၀ကျော် ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၂၀၁၃၊ ဇွန် လကုန်နဲ့ ဇူလိုင်လဆန်းမှာ သူ့အစ်ကို စိုးစိုး(လပွတ္တာ)နဲ့ duet show တစ်ခု ဘယ်လ်ဂျီယမ်မှာ လုပ်မယ်လို့ သိရတယ်။
Withoutafixed idea man, Khin Zaw Latt
His name is Khin Zaw Latt was born in 1980. His parents are U Thein Han and Daw Than Than. He is youngest son of six members of his family. His brother Soe Soe (Latputter) is also an artist. He was very strongly insterested in painting since he was young. After 10th Standart, he attended in Yangon University of Culture and then graduated in 2002. His brother Soe Soe helped him to prosper more knowledge for his artist life. He was certainly satisfied with art, didn't know what about success.
He likes many kinds of art by all of Myanmar artists. Especially Artist Sein Myint, who creates gold embroidery in Myanmar and American artist Jeff Koons's contemporary art.
He Loves to use acrylic more than other mediums. He doesn't like to haveafixed idea. He wishes to paint one or two subjects as his emotion, again and again. He exhibited the new series in Hong Kong from 22nd May to 23rd June in this year.
Most of the audience of Hong Kong Knows very well to go and see the art exhibitions, not the same Myanmar audience. He doesn't think about feed-backs from all of audience.
KZL gallery was opened in 2nd Feb 2012, display daily the paintings of his closed-friends, Myanmar well known artists. Sometimes, display group fund raising art shows to donate, for some places, there are really needed help.
He wants to message to new art generations, study and paint more and more everyday.
He considers about Myanmar art field, looks like pizza in splinters. The performance artists think about the creation of some painters, they make art for getting money.
Also the painters think about making performance, the performance artists going easy way coz they cannot create paintings.
In Myanmar, no have art magazine and journals, no art big culture centre every artist need to observe about art. He said that. He and his brother will exhibit duet art show on the last week of July, in Belgium, soon.
(Living Fashion Magazine, July, 2013)
Posted by PhyoPhyo at Thursday, June 27, 2013 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
ကျန်းမာသွက်လက်နေဖို့ တစ်နေ့စာ လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေဟာ ပြုလုပ်ရမခက်ခဲလှပေမဲ့ ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးက ခပ်များများပါပဲ။ တစ်နေ့တာအတွက်၊ နေ့တိုင်းအတွက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်သက်တာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနေမှာပါ။
ပထမဆုံးအိပ်ရာကနိုးထလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်လေးလှုပ်ရှားသလို အညောင်းဆန့်ပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပုံတူကူးချလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ပါ။ သွေးလည်ပတ်မှုနဲ့ အစာခြေစနစ်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးမှာပါ။ ကျောနာတာကိုလည်း သက်သာလျော့ပါးစေတယ်။ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ချေဖျက်ဖို့ သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်းကို ခံတွင်းမှာငုံပြီး ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ သံလွင်ဆီဟာ အပူပေးပြီးထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ အအေးခံပေါင်းတင်(cold-pressed) ထုတ်ထားတာဆို အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၁၅ မိနစ်ခန့် ခံတွင်းထဲမှာငုံပြီး gargle လုပ်နေရပါမယ်။ ပြီးရင် ထွေးထုတ်ပြစ်ပါ။ သံလွင်ဆီဟာ ငုံထားခါစမှာ အနည်းငယ်ခါးသက်သက်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဆီတစ်မျိုးဆိုတော့ ငုံထားရမှာ မဝံ့မရဲဖြစ်နေတတ်သေးတယ်။ gargle လုပ်တဲ့အခါ မရပ်မနားခပ်ပြင်းပြင်းမလုပ်ပါနဲ့။ အဲဒီလို လုပ်ခဲ့ရင် အာခံတွင်းမှာ အချိန်ခဏလေးနဲ့ ညောင်းညာပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်အထိ ထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲ gargle လုပ်ပေးနေရပါမယ်။ ငါးမိနစ်လောက်ကြာလာတာနဲ့ ဆီအရသာလို ကျိချွဲတာပျောက်လာတာကို သတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ ဆီကိုတော့ မျိုမချမိအောင် သတိထားရမှာပေါ့။ ထွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အာခံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ချွဲသလိပ်၊ အကျိအချွဲတွေပါထွက်လာတာ သိလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ခံတွင်းမှာရှင်းလင်းသန့်စင်သွားတဲ့ခံစားမှုကို လက်ငင်းရသလို နေ့တိုင်းတစ်နေ့တစ်ခါပြုလုပ်ပေးခဲ့ရင် ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ အိပ်မပျော်နိုင်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ လေးဘက်နာ၊ အူနဲ့ အစာအိမ်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း နဲ့ နှလုံး၊ နဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖျားနာမှုမျိုးတွေ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်။
မနက်စာကို ဘယ်တော့မှာ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့။ လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီး၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ အမျှင်ဓာတ်ပါ cereal မနက်စာမျိုးစားပါ။ ဒိန်ချဉ် ဒါမှမဟုတ် low-fat နွားနို့သောက်နိုင်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်မီးကင် နဲ့ ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးစားနိုင်ပါတယ်။
Hygiene နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ သွားတိုက်ရမှာပါ။
ဦးနှောက်ကို စွမ်းအင်ပြည့်ဝတက်ကြွစေဖို့ အလုပ်ပေးပါ။ ဥပမာ သွားတိုက်နေရင်းနဲ့ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဘက်ကနေ အကျီအဝတ်အစားရွေးနေတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သက်ပြင်းချနေမိတာထက် လက်နှစ်ဘက်၊ ဘယ်ညာနှစ်ဘက်လုံးအလုပ်ပေးထားတာဟာ လက်ငင်းအချိန်လေးမှာ ဘယ်လောက်မှ သတိမထားမိနိုင်တဲ့အမူအကျင့်လေးဖြစ်ပေမယ့် အယ်လ်ဇိုင်းမားလိုမှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းလာတတ်တဲ့ သက်ကြီးရောဂါတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ပေးနိုင်မယ့်အရာကို စဉ်းစားပါတဲ့။
ဆုတောင်းတာ၊ တရားမှတ်တာဟာ အဲဒီလိုမလုပ်တဲ့သူတွေထက် စိတ်ထိခိုက်စရာအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံလာခဲ့ရင်တောင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကျော်လွှားနိုင်ကြတယ်။
အနံ့တွေရှုရှိုက်စားသုံးပါတဲ့။ မွှေးရနံ့တစ်မျိုးမျိုးသုံးစွဲဖို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ နွေဦးကြက်သွန်နီ နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်လိုအစားအသောက်တွေအကုန်လုံးက သင်နဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူအစိမ်းစားသုံးတာဟာ ကလေးငယ်ဘဝမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါကူးစက်မှုတွေတောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ကြတယ်။ ချက်ပြုတ်လိုက်ရင် အဲဒီဂုဏ်သတ္တိတွေလျော့သွားတတ်တာကြောင့် အစိမ်းစားတာပိုပြီးအကူအညီပေးတယ်။ အဲဒီအနံ့မျိုးတွေကို ဇီဇာကြောင်တတ်သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သစ်သီးဖျော်ရည်နဲ့ ဆေးချလိုက်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ဝိုင်နီတခွက်သောက်ပေးပါ။ လဘက်ရည်ကြမ်းတခွက်မှာပါတဲ့ antioxidant ၊ ဝိုင်နီ နဲ့ သံလွင်ဆီတွေဟာ ရင်သားကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်အငွေ့ကရနိုင်တဲ့ ကာဆီနိုဂျင်(ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာ)ကို ကာကွယ်ပေးထားနိုင်တယ်။
အရိုးတွေကိုသန်စွမ်းအားကောင်းစေဖို့ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ကိုလည်း နေ့စဉ်မြှင့်တင်ပေးနေရမှာပါ။ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်တခွက်ကို တကျိုက်တည်းတုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အသက် ၃၀ ကျော်လာတာတဲ့ သင့်ရဲ့ အရိုးတွေဟာ စွမ်းအင်လျော့ကျလာတာကို မမေ့ပါနဲ့။ တစ်နေ့မှာ ၂၀၀ မီလီဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်။
ပူစပ်တဲ့၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ကောင်း ဟင်းမွှေးမဆလာများများပါတဲ့ အစားအစာမျိုးကလည်း ဟော်မုန်းဓာတ်အားကောင်းစေပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးစားပါ။ စွမ်းအားကြီး ကင်ဆာတိုက်ခိုက်သူပါလို့ ဆိုတယ်။ ဗီတာမင် စီ လည်း ပေါများကြွယ်ဝစွာပါရှိတယ်။ ကောင်းတဲ့သတင်းပြောရရင် ခရမ်းချဉ်သီးကတော့ ချက်ပြုတ်လိုက်တာတောင်မှ မူလအစွမ်းသတ္တိတွေ ပျောက်ပျက်လျော့ပါးမသွားနိုင်ပါဘူး တဲ့။ ခရမ်းချဉ်သီး နဲ့ ပန်းသီးဟာ ပန်းနာရင်ကျပ် နဲ့ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါတွေကို လျော့ပါးစေတယ်။
Folic acid ဖြည့်တင်းတာဟာ မိုက်မဲမှုမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်မှန်မှန် ဖြည့်တင်းရပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းပါးတဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အားလုံးအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသည်း၊ အသီးအနှံ နဲ့ ဖွဲနုတွေကနေ Folic acid ဓာတ်ရနိုင်တယ်။ ဖြည့်စွက်ဆေးပြားလည်းသောက်နိုင်တယ်။
ရေများများသောက်ပါ။ သင့်ဆီကနေ အခိုးအငွေ့ထုတ်လွှတ်တာမျိုးကို ရပ်တန့်ပါ။ ပြောချင်တာကတော့ ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့ပါပဲ။ နှာစေးတတ်သူ၊ မကြာခဏနှာချေတတ်သူဖြစ်ရင် အဲဒါကို ရပ်တန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
နေလောင်ဒဏ်ခံနိုင် sunscreen တွေဟာ တကယ်တမ်းအကျိုးပြုစေတာထက် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိကြတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ sunscreen သုံးစွဲသူအများစုဟာ သုံးစွဲပုံ၊ ပမာဏတွေ မမှန်လို့ပါ။ အဲဒီ sunscreen တွေအသုံးပြုထားပြီး နေရောင်အောက်မှာ အင်မတန်ကြာရှည်နေတတ်ကြတယ်။ sunscreen တွေဟာ မကြာခဏဖယ်ရှား ပြန်လိမ်းသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေထဲမှာ ဆော့ကစားကြသူတွေပါ။
ငိုလည်းငို၊ ရယ်လည်းရယ်ပါ။ စိတ်ပါလက်ပါရှိုက်ငိုလိုက်တာဟာလည်း ရယ်မောလိုက်သလိုပဲ ကောင်းမွန်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီလိုနဲ့ ညတစ်ညရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ အိပ်စက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ “ကောင်းသောညပါ၊ ကိုယ့်ရဲ့အသည်းလေး”လို့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ဆုတောင်းကြည့်ပါ။ စိတ်အာရုံကို ငြိမ်းချမ်းကြည်လင်အောင်ထားပြီး နောက်တစ်နေ့အတွက် ဆက်ပြီး အစဉ်အတိုင်းပဲ လှုပ်ရှားသွားဖို့ပါပဲ။ သိပ်ပြီးတော့ ခေါင်းခဲစရာမဟုတ်တဲ့ ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေ ရရှိနိုင်ကြမှာပါ။ ။
(မှတ်ချက်- သံလွင်ဆီ gargle က ကိုယ်တွေ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရေးထား/ ခံတွင်းထဲ ၁၅ မိနစ်ခန့် gargle နေ့တိုင်းလုပ်ဖြစ်/ သွားနာ၊ သွားကိုက်တာ သိသိသာသာကောင်းသွား)
Ref : 45 best health tips ever (www.health24.com)
(Living Fashion, July, 2013)
ဘာလီ ကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ ပျော်စံရာ ကျွန်းမြတ်မဟာ
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 26, 2013 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
အရှေ့တောင်အာရှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း ဆိုတာ နတ်ဒေ၀တာတို့ ပျော်စံရာ ဒေသလို့ အဆိုရှိပါတယ်။ လှပတဲ့ ရှုခင်းရှုကွက်တွေ စိမ်းစိုလန်းဆန်းတဲ့ တောင်ကုန်းတွေ ထူးထွေ ဆန်းပြားလှတဲ့ ကျောက်ဆောင် ကျောက်တောင်တွေ တောက်ပ၀င်းလက်နေတဲ့ သဲသောင်ပြင်တွေနဲ့ အလွန်တရာ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ မြေကြီးဟာ မီးတောင်ချော်ရေ ကြောင့် ကြပ်တီးလွင်ပြင်ဆန်သော်လည်း တုနှိုင်းမရှိ ကောက်ပဲသီးနှံ ဆံရေစပါးစသည် ဖြစ်ထွန်းပြီး သာယာဝပြောတဲ့ ဌာနေတခုပါပဲ။
အမှန်တကယ် ဆိုရရင် ကမ္ဘာမြေပေါ်က လောကနိဗ္ဗာန်ဘုံကလေးတခုဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ လှိုင်းစီးရာဌာန ဒိုင်ဗင်ထိုးရာဌာနအဖြစ် သတိမှတ်ထားတဲ့ နေရာကောင်းတခုလည်းဖြစ်လို့ လှိုင်းစီးကျွမ်းကျင်သူ ဒိုင်ဗင်ထိုးကျွမ်းကျင်သူတို့ဟာ ဘာလီကမ်းခြေကို မဖြစ်မနေ လာကြရပါ တယ်။ကြီးမားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းရှိရာ ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားရာ ရှေးဟောင်းသုတေသီတို့ အကြိုက်တွေ့ရာ ဌာနေလည်းဖြစ်တယ်။ ဘာလီကျွန်းကို တောင် မြောက် အရှေ့ အနောက် အလယ် စသည် ခွဲခြားထားတယ်။ ဘာလီဟာ အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းစုပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော် ရှိသည့်အနက်က တစ်ခုဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည်၈၀ ရာခိုင်နှုံး လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ သြဂတ်စ် စက်တင်္ဘာနှင့် ခရစ်စ်မတ်ကာလ နှစ်သစ်ကူးကာလများမှာ ဧည့်အလွန်များပြားတယ် အုပ်စုလိုက် ရောက်လာတတ်ကြတယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို လိုလားသူတိုင်း ပျော်ရွှင် ကြည်နူးမှုကို လိုလားသူတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ အပန်းဖြေ နားနေလိုသူတိုင်း ဘာလီကိုရောက်လာစမြဲမို့ ဘာလီကလည်း ခရီးသွားဧည့်သည်များကို လိုအပ်သမျှ အပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာမှာ အထူး ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇောနေတာပါ။ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ 100BC အစောပိုင်းကဟိန္ဒူတွေ စတင်ရောက်ရှိနေထိုင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာလီမှာ အိမ်နီးချင်းဂျာဗားကျွန်းသားတွေလည်းရောက်ရှိနေထိုင်ကြတယ်။
ဂျာဗားဘုရင် ရဲ့ လက်အောက် Majapahit Empire အတွင်းမှာ တည်ရှိပြီး နတ်ကိုးကွယ်မှု ထွန်းကားပျံ့နှံ့ခဲ့တာပါ။ ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ အနုပညာလက်ရာ စာပေ ကိုးကွယ်မှု ဘာသာတရားစသည် တို့မှာ ယုံကြည်သက်ဝင်ခဲ့တယ်။ ဘာလီဟာ နတ်ကိုးကွယ်မှု အထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရား နတ်ဘုရားမများက သီးနှံစပါး အောင်မြင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးတယ်လို့ ယူဆကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာဗါးနဲ့ ဘာလီကျွန်းစု တွေမှာ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းပေါင်းက ၂၀၀၀၀ကျော် တည်ရှိနေတာပါ။ ဘာလီကို လာရောက်လည်ပတ်ချင်အောင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အရာတွေထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးကတော့ ဘာလီ ဂီတနဲ့ အကပါပဲ။ ဂျာဗားကျွန်းနဲ့ ဘာလီကျွန်းဟာ ယဉ်ကျေးမှုချင်း သိပ်တော့ ခွဲခြားမရပါဘူး။
Barong လို့ ခေါ်တဲ့ ခြင်္သေ့အက ဟာ ခလေး လူကြီး လူကြိုက်များပါတယ်။ ခြင်္သေ့အကကို သရုပ်ဆောင်သူဟာ ခြင်္သေ့အရေ နှင့် ခြင်္သေ့ မျက်နှာဖုံးကိုစွပ်ပြီး သူသေ ကိုယ်သေ စိတ်ပါ လက်ပါ တိုက်ြကရတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နတ်ဆိုးနဲ့ နတ်ကောင်း တို့ရဲ့ အဆုံးစွန် ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး နတ်ကောင်းက အောင်ပွဲခံရခြင်းကို သရုပ်ဖေါ်ကပြတာပါ။ Calonarang ဆိုတဲ့အက ကတော့နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့ပွဲအသွင် ကပြကြရတာပါ။ ခမ်းနားကြီးကျယ်လွန်းလို့ ကြည့်ဖူးသူတိုင်းက လက်ဖျားခါရပါတယ် တဲ့။ ချီးကျူးမဆုံးကြဘူး။
Kecak ဆိုတာက မျောက်ကပါ။ သရုပ်ဆောင်ကပြသူ အယောက် ၂၅၀ က အစွမ်းပြ ကခုန်တဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်း ပါပဲ။
Legong Keraton အက ဆိုတာက ၁၂ရာစုက ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အကဖြစ်တယ်။ မနောအာရုံခံပြီး မကောင်းဆိုးဝါးများကို နှင်ထုတ်တဲ့ အက ပါပဲ။ ဒီအကကိုတော့ ငယ်ရွယ်နုပျို ပြီး ချောမောလှပတဲ့ မိန်းမပျိုကလေးများက သရုပ်ဆောင်ကပြကြတာမို့ အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ပွဲပါ။
Nyepi ပွဲတော်ဆိုတာက ဘာလီပြက္ခဒိန်မှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ နေ့တနေ့ ဖြစ်တယ်။ပီပီပြင်ပြင်တိတ်ဆိတ်စွာနေထိုင်ခြင်းဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးများ ဘာမှ မလုပ်နိုင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားရ တဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ဟိန္ဒူနှစ်သစ်ကူးပွဲလို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အသွင်အမျိုးမျုိး အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့် အရုပ်ဆိုးဆိုး ဘီလူးသဏ္ဍာန် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သူတွေ စည်တန်းလှည့်လည် ထွက်ခွာကြတာမြင်တွေ့ ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အကြို ပွဲနေ့ မနက် ၆နာရီက နောက်တနေ့ ၆နာရီထိ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရမှာ ဖြစ်တယ်။
လူသေဆုံးတဲ့အခါ ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ Funerals အသုဘအခမ်းအနားများ ဟာ ဆန်းပြားခမ်းနားကြီးကျယ်လှပါတယ်။ အချိန်တိုင်းတွေ့မြင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေအတွက် ဘာလီကျွန်းသားတို့ရဲ့ အနုပညာ လက်ရာ စာပေ လင်္ကာ စသည် လေ့လာစရာတွေကတော့ မကုန်နိုင် မခန်းနိုင် အသင်္ချေ အနန္တပါပဲ။ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းတွေ အများဆုံးရှိတယ်။ ရေကြောင်းခရီးနဲ့ သွားမလား ကုန်းလမ်းသည်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စသည် အားလုံး ရှိတယ်။
နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ စူပါမားကက်ကြီးတွေ ရှိတယ် ။ဘာလီကျွန်းထွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး ၀ယ်ယူနိုင်တယ်။ သင်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ ။ ဘာလီမှာ ဘာမဆို..လိုတာရနိုင်ပါတယ်။ Sun Far Travels & Tours Co .Led မှလည်း ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။
Living Fashion Magazine, July, 2013
Ref: wiki travel
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 26, 2013 Labels: ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်
Walt Disney Studios, Motion Pictures
ဒါရိုက်တာ - Gore Verbinski
ထုတ်လုပ်သူ - Jerry Bruckheimer, Gore Verbinski
ဇာတ်ညွှန်း - Justin Haythe, Ted Elliott, Terry Rossio
ဝတ္ထု - Ted Elliott, Terry Rossio, Justin Haythe, Lone Ranger by Fran Striker
သရုပ်ဆောင်များ - Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson, William Fichtner
Walt Disney ရဲ့ ကောင်းဘွိုင်စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ သွက်သွက်လက်လက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပါ။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်က ရေဒီ ယိုဇာတ်လမ်း Lone Ranger ကို ပုံဖော်ထားတယ်။ မျက်နှာဖုံးတပ် ကောင်းဘွိုင်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင် တက္ကဆက်နယ်သား ဂျွန်ရိဒ် (Armie Hammer)နဲ့ သူ့ရဲ့ အမေရိကန်အင်ဒီယန်းမိတ်ဆွေ တွန်တို(Jonny Depp)တို့ နှစ်ဦးသားလက်တွဲပြီး အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ အတ္တကြီးသူတွေကို ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ တွန်တိုဟာ သေနတ်ပြစ်ကျွမ်းကျင်တယ်။ ပစ်မှတ်ကိုမလွဲတဲ့ လက်ဖြောင့်သေနတ်သမားမျိုး။ တွန်တိုကို “လူရိုင်းလူကြမ်း” လို့ ခေါ်နေကြတယ်။ မြင်းစီးလည်းအင်မတန်ကျွမ်းကျင်သေးတဲ့သူပါ။ တွန်တိုရဲ့ မြင်းရဲ့ အမည်က အဖြူလွလွလေးမို့ “ဝှိုက်ဖဲလာ” တဲ့။ ရိဒ် ရဲ့ ဖက်ရှင်ကိုပြောရရင်တော့ မျက်နှာဖုံးအမြဲတပ်ထားတတ်တာပဲပေါ့။ ကောင်းဘွိုင်တွေ မြူးတူးသောက်စားကြတဲ့ အရက်ဘားတွေမှာ ရိဒ်ကို တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိဒ်ဟာ ဘယ်တော့မှ အရက်သေစာမသောက်သူ၊ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်တဲ့သူ၊ အင်္ဂလိပ်စကားကိုတောင် ဗန်းစကားဘယ်တော့မှမသုံးဘူး။ သဒ္ဒါနည်းကျကျပြောဖို့ဂရုစိုက်တဲ့သူလည်းဖြစ်နေသေးတယ်။ ကောင်းဘွိုင်တွေနဲ့ ဘယ်တော့မှာကင်းကွာလို့မရတဲ့ သေနတ်တွေလည်း ရိဒ် အသုံးပြုတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ကျည်တစ်တောင့်နဲ့ ဘယ်တုံးကမှ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ သတ်ဖြတ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ တကယ့် လူကြီးလူကောင်းအဖြစ် နာမည်ကြီးတယ်။ ရိဒ်က လူရိုင်းလူကြမ်း တွန်တို ကိုတော့ အင်မတန်ယုံကြည်တယ်။ နှစ်နှစ်ကာကာခင်မင်ရင်းနှီးနေတယ်။ ကောင်းဘွိုင်တွေကို သဘောကျတတ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ၊ ဂျွန်နီဒက်ပ်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟန်ပန်တွေနှစ်ခြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် လက်မလွှတ်ချင်စရာ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဦးမှာပါပဲ။ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ၂၀၁၂ က ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ သတ်မှတ်ခံထားခဲ့ရတဲ့ ဒက်ပ်အတွက် ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း “တွန်တို” ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ ငွေတွေသိမ်းယူနိုင်ဦးမှာလားဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဒါရိုက်တာ - Dean Parisot
ထုတ်လုပ်သူ - Lorenzo di Bonaventura
ဇာတ်ညွှန်း - Jon Hoeber, Erich Hoeber
ဝတ္ထု - Red by Warren Ellis, Cully Hamner
သရုပ်ဆောင်များ - Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Catherine Zeta-Jones, Lee Byung-hun, Anthony Hopkins, Helen Mirren
အငြိမ်းစားစီအိုင်အေအေးဂျင့် ဖရန့်ခ်မိုးစက်(Bruce Willis) ဟာ စတိုးဆိုင်မှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ခြမ်းနေချိန် ချောင်းမြောင်းလိုက်လာသူတစ်ဦးနဲ့တွေ့တယ်။ အဲဒီလူက “ဖရန့်ခ်” လို့ လေသံတိုးတိုးနဲ့ အသံပြုတယ်။ “မင်း ဒီနေရာဘာလာလုပ်တာလဲ” “ငါ မင်း အကူအညီလိုနေပြီ ဖရန့်ခ်” “ငါ အခုအနားယူလိုက်ပြီလေကွာ”။ ဖရန့်ခ်တို့ အပြန်အလှန်ပြောကြတယ်။ ဖရန့်ခ် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ရမယ့်အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ဖရန့်ခ် မိတ်ဆွေကြီးက “မင်းမှ ဘယ်သူ့ကိုမှအပြတ်မရှင်းနိုင်ခဲ့ပဲ ကွ” လို့ ထပ်ပြောပြန်တယ်။ တကယ်ဆို အပြတ်ရှင်းတဲ့ကိစ္စက အသတ်ဝိညာဉ်တွေပျက်စီးကုန်တာပဲ။ အပြတ်မရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးပဲထား။ အဲဒါ ကောင်းတဲ့အရာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ “မဟုတ်ဘူး၊ ခု သူတို့ပြန်လာနေပြီ။ ငါ ခံစားလို့ရနေတယ်” ဖရန့်ခ် မခိုးမခန့် ရယ်ပြစ်လိုက်တယ်။ သူတို့ဟာ စီအိုင်အေ အေးဂျင့်ဟောင်းတွေပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဖရန့်ခ်နဲ့ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီး ပြေးပြေးလွှားလွှား လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲ ပြန်ရောက်လာကြပြန်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အနက်ရောင်စစ်ဆင်ရေးကို တစ်ခါပြန်စကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်က ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့နျူကလီးယားလက်နက်ပျောက်ဆုံးနေတာကို ရှာဖွေကြရတော့မယ်။ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့ သနားညှာတာမှုမရှိတဲ့လုပ်ကြံသူတွေ၊ ရက်စက်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ အာဏာမှာယစ်မူးနေကြတဲ့ အစိုးရအရာရှိတွေကြိုးပမ်းမှု၊ နျူကလီးယားလက်နက်နဲ့ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အဲဒါကို ရပ်တန့်နိုင်မှဖြစ်မှာ။ ဖရန့်ခ် နဲ့ စွယ်စုံရ မိတ်ဆွေကြီးရဲ့ လှုပ်ရှားရမယ့်မစ်ရှင်က ပဲရစ်၊ လန်ဒန် နဲ့ မော်စကိုမြို့တွေဆီမှာ။ အင်အားသာလွန်သလို၊ ပရိယာယ်လည်းများလှတဲ့သူတွေကြားထဲမှာ ဖရန့်တို့ပိုင်ဆိုင်တာက ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များလှတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ စီအိုင်အေကျောင်းအိုကြီးကသင်ပေးလိုက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေပဲရှိမယ်။ မစ်ရှင် အောင်မြင်အောင်၊ သူတို့ရဲ့ အသက်ရှုသံတွေ ဆက်လက်တည်တံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမှာပါပဲ။ ကိုးရီးယားမင်းသား Lee Byung-hun ရဲ့ ခပ်သွက်သွက်အက်ရှင်ပြကွက်တွေလည်း ကြည့်ရဦးမှာပါ။ ၂၀၁၀ က ရုပ်ရှင် Red ပထမပိုင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်မင်းသမီး Helen Mirren လည်း ဗစ်တိုးရီးယားအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
ဒါရိုက်တာ - Pierre Coffin, Chris Renaud
ထုတ်လုပ်သူ - Chris Meledandri, Janet Healy
ဇာတ်ညွှန်း - Cinco Paul, Ken Daurio
အသံသရုပ်ဆောင်များ - Steve Carell as Gru, Russell Brand as Dr.Nefario, Kristen Wiig as Lucy Wilde, Benjamin Bratt as Eduardo, Steve Coogan as Silas Ramsbottom, Ken Jeong as TBA, Miranda Cosgrove as Margo, Moises Arias as Antonio
Despicable Me ပထမပိုင်း မှာတုန်းက စူပါဗီလိန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂရူး(Steve Carell)ဟာ ဂရူးလိုပဲ စူပါဗီလိန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ဘက် ဗက်တာ ဆီကနေ မိဘမဲ့ကလေးလေးသုံးယောက်ကို ကယ်ဆယ်ပြီး မွေးစားခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကလေးတွေကို သိပ်ချစ်သွားတဲ့ ဂရူးဟာ မဆိုး/ မမိုက်တော့ဘူး။ ဗီလိန်တစ်ဦးအဖြစ် မနေလိုတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ဗီလိန်ဆန့်ကျင်ရေးလိဂ်အသင်းကိုတောင် ဖွဲ့စည်းလိုက်တော့တယ်။ အသင်းသားတွေစုစည်းတယ်။ ဂရူးရဲ့ဘဝသစ်ဟာ အေးအေးလူလူပဲ။ မမျှော်လင့်ပဲပေါ်လာတတ်တဲ့ထူးထူးခြားခြားအဖြစ်အပျက်တွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂရူး စုဆောင်းလိုက်တဲ့ လူစီဝိုင်းလ်(Kristen Wiig) နဲ့ ဆီလာ့စ် ရမ်စ်ဘောတွန်(Steve Coogan)တို့ကို ဗီလိန်ဆန့်ကျင်ရေးလိဂ်ရဲ့ ရုံးချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါ တိုက်ကြခိုက်ကြရမယ့် ပြစ်မှုတစ်ခုနဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်။ အဲဒီပြစ်မှုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေပြီ။ အက်ဒွာဒိုး (Benjamin Bratt) ဆိုတဲ့ဗီလိန်ဟာ ဂရူးကို ရှုံးနိမ့်မှာပါပဲ။ တချိန်တုန်းက ဂရူးကိုယ်တိုင် ဗီလိန်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့ ဗီလိန်တွေ ဘာတွေတွေး/ ဘယ်လိုခြေလှမ်းပြင်နေသလဲ၊ ဒါတွေ ဂရူးက ကြိုပြီး သိနေတော့တာပေါ့။ လိဂ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် စီလာ့စ်က ဗီလိန် အက်ဒွာဒိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါ ဂရူးကို အကူအညီတောင်းချင်တယ်။ ဂရူးရဲ့ လက်ထောက် နက်ဖားရီးယိုး(Russel Brand)ဟာ သူ့ရဲ့နောက်ကအမြဲရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ မာဂိုး၊ အီဒို့သ်၊ အက်ဂ်နက်စ် တို့ရှိနေကြတယ်။ ဂရူး မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အင်အားနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို နောက်တစ်ကြိမ် ကယ်ဆယ်ရတော့မယ်။ 3D ကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့စွန့်စားခန်း၊ ဇာတ်မြူးဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်တွေပါ ရယ်မောပျော်ရွှင်စွာကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပါ။
ဒါရိုက်တာ - Robert Schwentke
ထုတ်လုပ်သူ - Keith Goldberg, Peter M. Lenkov, Ori Marmur, Jonathon Komack Martin, Neal H. Moritz, Mike Richardson, David Dobkin
ဇာတ်ညွှန်း - Phil Hay, Matt Manfredi
ဝတ္ထု - Rest in Peace Department by Peter M. Lenkov
သရုပ်ဆောင်များ - Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker
R.I.P.D ဟာ နစ်ခ်ခရုဇ်ဝေါ့ကာ(Ryan Reynolds) နဲ့ ရွိုင် ပိုလ်စီဖာ(Jeff Bridges) တို့ ဦးဆောင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ 3D သဘာဝလွန်အက်ရှင်-စွန့်စားခန်းရုပ်ရှင်ပါ။ S.W.A.T ရဲအရာရှိ နစ်ခ်ဟာ တာဝန်ချိန်ပြေးရင်းလွှားရင်း၊ လူဆိုးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရင်းနဲ့ သေနတ်မှန်ကာ အမြင့်ကနေအရှိန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ သူ သတိရလာတော့ မီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အဆောက်အဦးထဲကနေ တလှမ်းချင်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ အားလုံးဟာအနှေးပြကွက်ရုပ်ရှင်တစ်ကားလိုပဲ။ အပြင်ဘက်ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့အကြည့်မှာ နစ်ခ်ကို အားကြီးတဲ့တစ်စုံတစ်ရာကဆွဲယူသွားတော့တယ်။ နစ်ခ် ရုံးခန်းတစ်ခုထဲမှာရောက်နေပါပြီ။ ခုံမှာ အကျအနထိုင်လျှက်သား။ အရှေ့မှာကြီးကြပ်ရေးမှူးတဲ့ အမျိုသမီး(Mary-Louise Parker)ရှိနေတယ်။ နစ်ခ်က မေးရတော့တယ်။ “ငါ အခု ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲ” “ကျွန်မတို့ရှင့်ကိုအလိုရှိနေတယ်ဆိုတာ ရှင်မြင်ပြီမလား။ ရှင် ကျွန်မတို့ရဲ့ R.I.P.D မှာ အလုပ်လုပ်ရမယ်” “ဘာလဲ R.I.P.D” နစ်ခ်ရဲ့မေးခွန်းကို ပြန်ဖြေလိုက်ပုံက ထိတ်လန့်စရာ။ “Rest in Peace Department လေ” တဲ့။ နစ်ခ် ကြောက်အားလန့်အားငြင်းဆန်လိုက်တယ်။ နစ်ခ် ရင်ဘတ်ကအရေပြားတွေ လောင်ကျွမ်းကုန်တော့တယ်။ R.I.P.D ဆိုတဲ့ တံဆိပ်က အသားမှာခပ်နှိပ်ပြီးသားဖြစ်လို့နေပြီ။ “ရှင့် ရဲ့ အလုပ်က” ..... R.I.P.D ဌာနထဲ ကြီးကြပ်ရေးမှူးအမျိုးသမီးက လိုက်ပြတယ်။ နစ်ခ် နဲ့ အတူ အလုပ်တွဲလုပ်ရမယ့်သူ စစ်ပြန်ကြီးတစ်ဦး ရွိုင် ပိုလ်စီဖာ နဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ Rest in Peace Department ဟာ သေဆုံးပြီးသားရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဌာနဖြစ်ပြီး သက်ရှိလူသားတွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတယ်။ တမလွန်ဘဝကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ငြင်းဆန်နေတဲ့ ကြမ်းတမ်းဆိုးသွမ်း/ သွေးဆာသူ မိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေ သက်ရှိလူသားတွေကို အနှောင့်အယှက်မပြုနိုင်အောင် တားဆီးကြရမှာပါတဲ့။ နစ်ခ် အလုပ်သစ်မှာလည်း ရဲအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းရဦးတော့မယ်။ ။
(Yati Magazine, July, 2013)
ကိုယ့်ရဲ့ ကားကို လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ မြန်မြန်ဆေးကြောချင်ရင်
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 26, 2013 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
ကိုယ်ထင်မှတ်မထားတဲ့ ရိုးရှင်းပြီး၊ ဈေးသက်သာတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကား ကို ဘယ်လိုဆေးကြောမလဲ။ ပြောင်လက်တောက်ပနေအောင် ဘယ်လိုကြာကြာထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ။ ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေက ရိုးစင်းပေမယ့် အသုံးဝင်နေတာကြောင့် စမ်းကြည့်ရအောင်နော်။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 26, 2013 Labels: ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့
မွမ်းမွမ်းဆင်သည်၊လူရှင်ရပ်ထက်ဝန်း တည့်လေး။ ။
ရှေးမြန်မာဘုရင်များလက်ထက်တော်ကတည်းက နယုန်လမှာ သံဃာတော်များ “စာတော်ပြန်ပွဲ” ပြုလုပ်ကျင်းပပေးတယ်လို့ သိရတယ်။ ယခုအခါ ပထမပြန်စာမေးပွဲ ဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါက နယုန်လပြည့်မှာ နတ်ဗြဟ္မာများစုဝေးရောက်ရှိလာခြင်း ရဟန္တာများစုဝေးရောက်ရှိလာခြင်း၊ ဘုရားရှင်က မဟာသမယသုတ်တော်ကို ပြန်လည်ချီးမြှင့် ဟောကြားခြင်း တို့ကြောင့် နယုန်လပြည့်ကို “မဟာသမယအခါတော်နေ့ " ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဂေါတမဘုရားရှင်းလက်ထက်က ကပ္ပိလ၀တ်ပြည်နှင့် ကောလိယပြည်အကြား ရှိ ရောဟနီမြစ်ရေကို သူပိုင် ငါပိုင် ရေလုကြတဲ့ နှစ်ပြည်ထောင်လယ်သမား ဆွေမျိုးသားချင်းများကို အချင်းချင်းညီညွတ်သင့်တင့်စွာ ခွဲဝေသုံးစွဲဖို့ ဘုရားရှင်က မျှတစွာ ဆုံးဖြတ်ဟောကြားခဲ့တယ်။နှစ်ပြည်ထောင် မင်းတို့ သွေးချောင်စီးမဲ့အရေးမှ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကို မျှော်ကိုးပြီး ဘုရားရှင်က နှစ်နိုင်ငံစပ်ကြား ကောင်းကင်ယံမှာ ထက်ဝယ်ဘွဲ့ခွေ ထိုင်နေတော်မူလျက် ဟောကြားဆုံးမခဲ့တယ်လို့ ငါးရာ့ငါးဆယ် ဇတ်တော်မှာလာပါတယ်။
နှစ်ဘက်သော မင်းညီမင်းသား ၅၀၀ တို့ဟာ လည်း ဘုရားရှင့်အထံတော်မှာ ရဟန်းပြုခဲ့ကြတယ် တဲ့။ အဲဒီ ရဟန်း၅၀၀ နဲ့ နတ်ဗြဟ္မာတွေ စုဝေးရောက်ရှိလာကြတာကြောင့် ဘုရားရှင်က ငြိမ်းချမ်းစွာ တရားရေအေး တိုက်ကြွေးတဲ့ နေ့ကို “ မဟာသမယနေ့" ရယ်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်တာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ သည်နေ့လို နယုန်လပြည့် ကြုံကြိုက်တုံး ကြုံကြိုက်ဆဲ ကာလမှာ သီတင်းသီလဆောက်တည်ခြင်း၊လှူဖွယ်ဝတ္ထုများဖြင့် ဘုရားကျောင်းကန်သွားရောက်ခြင်း။မဟာသမယသုတ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ မေတ္တာမျှဝေခြင်းစတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။
ချိန်ခါသင့်ဆုံ၊ လနယုန်တွင်၊ နတ်စုံ စုဝေး၊ မြေ့မြေ့အေးသည်၊ နွေးထွေးလှိုက်လဲမဆုံးတည်း။
(နယုန်မိုးသေး မြက်သားမွေး လို့ ဆိုပေမဲ့ ဒီနှစ် နယုန်က မိုးတော်တော်ကြီးပါတယ်။ ကဆုန်လကလည်း မိုးတော်တော်လေးရွာခဲ့တာမို့ မိုးဦးကျ စောသလိုပဲ။ အပူရှိန်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက် လူတွေ အပူဒါဏ်က ကင်းလွတ်အေးငြိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားတန်းခိုးတော်ကြောင့်ပါ။
ဒါပေမဲ့ခုတလော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတာကြားနေရတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒပါ။ ဗူဒ္ဓရဲ့ လမ်းစဉ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ပါ။မေတ္တာတရားသက်သက်မို့ လုံးဝ အကြမ်းဖက်ခြင်းမရှိပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့ နက်ရှိုင်းတဲ့အတွက် လိုက်နာဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။ တဘက်ကကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာလည်း လူသားများသာ ဖြစ်တဲ့အလျှောက် လူသားဆန်စွာ တုံ့ပြန်ခြင်းသဘောရှိတယ်လို့ နားလည်ထားပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းက ပို ကောင်း ပို မြင့်မြတ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်ချုပ်ဟာလည်း သည်းခံခွှင့်လွှတ်တတ်ဖို့ပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဓမ္မပဒမှာ “လေညာသို့ ပြစ်လွှင့်လိုက်သော မြူမှုံသည် ထိုပြစ်လွှင့်သူ၏ အပေါ်သို့သာ ပြန်ကျသကဲ့သို့ မပြစ်မှားထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြစ်မှားလျှင် ထိုအပြစ်သည် ထိုသူအပေါ်သို့သာ ကျရောက်နိုင်သည်။” လို့ ပြဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဟာ မိမိတို့ရဲ့ တဒင်္ဂဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်ကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ချိုးနှိမ်ပြီး (ဘုရားရှင့်စကားကို လိုက်နာသောအားဖြင့်)ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြပါလို့ ပန်ကြားလိုပါတယ်။)
ပြီးတော့ “တခဲနက်သော ကျောက်တောင်သည် အရပ်လေးမျက်နှာမှ လာသော လေကြောင့် မတုန်မလှုပ်သကဲ့သို့ ပညာရှိတို့သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်း ချီးမွမ်းခြင်းတို့ကြောင့် မတုန်လှုပ်ကြကုန်။” လို့ ဓမ္မပဒမှာ ပြဆိုထားသည့်အတိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာ ဘယ်သူဘာပြောပြော တုန်လှုပ်ယိမ်းယိုင်မှုမဖြစ်ကြပါနှင့်လို့ ပန်ကြားအစီရင်ခံပါရစေ။
(မအားတာနဲ့ ဘလောဂ့်မှာ နယုန်လပြည့်နေ့ကျော်မှပဲတင်လိုက်ပါတယ်)
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 04, 2013 Labels: ကဗျာ, စုမီအောင်ရဲ့စာ
Pastel on paper by artist Nenad Vuckovic
မြေကြီးတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲတပြန့်တပြော စိမ်းစိုဝေဖြာနေတဲ့ မိသားစုဥယျာဉ်မြေမှာ
စကားတစ်လုံးးက အများတကာ ကလေးတွေလို
ပြတင်းဝကနေ ငါလှမ်းမြင်ဖူးတာ `အစိမ်း´ ပါ။
အရင်ဆုံး တိုးဝင်ချဉ်းကပ် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရတာက
အဖေ့ရဲ့ ချွေးတွေ၊ အချိန်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေပေါ်မှာ
ကမ္ဘာမှာ တုနှိုင်းမမီတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေကြီးပေါ့။
ကမ္ဘာဦးအစ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထက် သာတယ်လို့ ငါပြောရဲတယ်။
အဲဒီဥယျာဉ်မှာ အမေက အဖေ့ရဲ့ ချွေးတွေကို သုတ်ပေးခဲ့တယ်။
အဖေ့ရဲ့အချိန်တွေ တိုးပွားအောင် အမေက သူ့ဘ၀ကို ဖဲ့ချွေပေးတယ်။
အမေက သူ့လိုအင်ဆန္ဒတွေဝှက်သိုလို့ အဖေ့အနား ဖေးမ ကူတယ်။
မြေကြီးစော်နံနေတဲ့ အဖေ့ရဲ့ လက်တစ်စုံကို အမေက နေ့စဉ် တမက်တမောပွေ့ယူနမ်းရှိုက်နေခဲ့တာပေါ့။
ဒါကြောင့်ပဲ အဖေက လျှို့ဝှက်တဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ အလှဆုံးဥယျာဉ်ကို ဖန်တီးနိုင်တယ်။
အဖေဟာ တကယ့်ပါရမီရှင်ပေါ့။ ဧဒင်ကို ဖန်ဆင်းတဲ့ ဘုရားသခင်ထက် သာတယ် လို့ ငါပြောရဲတယ်။
အဖေ့ရဲ့ဥယျာဉ်စိမ်းစိမ်းမှာ တောက်တက်တောက်တက်ပြေးလွှားရင်း ငါကြီးပြင်းခဲ့တယ်။
အမေက နာမည်ပေးတော်တယ်။ ငါတို့ မောင်နှမတွေမှာ လှပတဲ့နာမည်တွေ ကိုယ်စီ ရှိသလို ငါတို့ခြံမှာ လှပတဲ့နာမည်ရှိတယ်။
အဖေ့ရဲ့ စိမ်းမြမြဥယျာဉ်မှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ငါတို့ဟာ အစိမ်းရောင်ကို ကောင်းကောင်းသိသလို သူ့အပေါ် ချစ်မက်ရကောင်းမှန်းလည်း ကောင်းကောင်းသိခဲ့ကြတယ်။
ငါ့အသက် လေးဆယ်ကျော်၊ အဖေက ရှစ်ဆယ်ကျော်၊ အမေက ခုနစ်ဆယ်ကျော်။
ဘ၀တွေ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ဆိုသလို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ။ မေမေက မြေကြီးပေါ် မဆင်းနိုင်တော့ဘူး၊ အချိန်ပြည့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ။ မြေကြီးတွေထိုးဆွလို့ သစ်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးဖို့ကိုလည်း မေမေမေ့ခဲ့ပါပြီ။
မေ့ဆို မေမေ့မှာ ထိုးဆွစရာ၊ စိုက်ပျိုးစရာ မြေကြီးတွေမှ မရှိတော့တာ။
ညနေညနေတွေဆို ဖေဖေက ခါးကလေး ကိုင်းကိုင်းကိုင်းကိုင်းနဲ့ လှုပ်စိလှုပ်စိ ရွေ့ရွေ့သွားရင်း
ပြတင်းမှာရပ်လို့ ဝေေ၀သီသီ မှုန်မှုန်ရီရီ မျက်လုံးတွေနဲ့ အပြင်ကို ငေးငေးကြည့်တယ်။
ဖေဖေ့မြင်ကွင်းထဲ ပေါ်လာတာက ကားဂိုဒေါင်တစ်လုံး၊ ရေကူးကန်တစ်ကန်၊ သုံးထပ်တိုက်တစ်လုံး၊ ခြံဝင်းအနှံ့ နေရာလွတ်မကျန်အောင် ခြယ်လှယ်ထားတဲ့ တမံသလင်းအခင်းအကျင်းတွေ၊ ပြီးတော့ ရေလောင်းစရာမလိုတဲ့ ပလတ်စတစ်ပန်းပင်တချို့…၊
ဖေဖေ့စိတ်ထဲ တွေးးတွေးနေမှာ သေချာတယ်။
ခမ်းခမ်းနားနား မြင့်မြင့်မားမား နေရပေမဲ့ ငါ လန့်မိနေတတ်တယ်။
အထူးသဖြင့် ဟော့ဒီ ၀ရန်တာထက်ကနေ ငုံ့ငုံ့ကြည့်မိလေတိုင်းပေါ့။
ငါဟာ ဖေဖေ့မြေကြီးတွေကို ခိုးယူခဲ့သူလား …..။
ပြီးတော့ ငါ့သားသမီးတွေကို စိမ်းမြမြဥယျာဉ်တစ်လုံး ဖန်ဆင်းပေးနိုင်ပါဦးမလား။
ငါကသာ စိုးထိတ်နေတာပါ ။
ငါ့ကလေးတွေက ကိန်းခန်းကြီးကြီးနဲ့ အ၀ါရောင်ပျော်ရွှင်မှုတွေကြားမှာ ငါချစ်ဖူးတဲ့ အစိမ်းရောင်ကို အမေ့ကြီးမေ့လို့……..။
Su Mie Aung
1:45 am, 02-06-2013
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 04, 2013 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
၁. ဦးတည်ရာတစ်ခုတည်းဆီ ရှေးရှုကြသူများ
၂၀၁၀ The X Factor သီချင်းပြိုင်ပွဲကနေ လူသိများလာခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်-အိုင်းရစ် ပေါပ့်လူငယ်အဖွဲ့ One Direction ရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်တွေအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားကို ဗြိတိသျှရုပ်သံလိုင်းChannel4အတွက် ရိုက်ကူးပါတော့မယ်။ မိနစ် ၆၀ စာ မှတ်တမ်းကားကို I Heart One Direction လို့ နာမည်ပေးထားပြီး social media တွေဖြစ်တဲ့ Twitter နဲ့ Facebook က အုပ်စုပရိတ်သတ်အဖွဲ့လေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် Directioners ဆိုတဲ့ One Direction fan group ကို အခြေခံထားပါတယ်။ Cutting Edge film ကအထောက်အပံ့ပေးပြီး ဆုရဒါရိုက်တာ ဒေစီအက်စ်ကွစ်သ် က ရိုက်ကူးနေပါတယ်။ နွေရာသီအကုန်မှာ Channel4ကပြသမှာပါ။ Channel4ဒါရိုက်တာ အဲမာကူးပါက “Cutting Edge ရုပ်ရှင်ကားကြောင့် အင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း Directoner ရဲ့ အဖွဲ့သားတစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ One Direction အဖွဲ့သား ဟယ်ရီစတိုင်လ်စ် ပဲရစ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာ အဲဒီ ၁၉နှစ်သားလူငယ်လေး ဟိုတယ်တံခါးဝကနေ ကားဆီအသွား ပရိတ်သတ်ရာပေါင်းများစွာအပြေးအလွှားအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဝိုင်းလာခဲ့ကြသေးတယ်။ One Direction ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေက လတ်တလောမြင့်မားနေတာကြောင့် I Heart One Direction မှတ်တမ်းကားကလည်း စိတ်ဝင်စားမှုရရှိကြဦးမှာပါ။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မော်ဂန်စပါးလော့ခ် က လည်း One Direction ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအကြောင်း ရိုက်ကူးနေပြီး ယူကေမှာ သြဂုတ် ၂၉ ရက် နဲ့ ယူအက်စ်မှာနောက်တစ်ရက် 3D ကားအဖြစ် ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ဦးမှာပါ။ Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles နဲ့ Louis Tomlinson တို့ ပါဝင်တဲ့ One Direction အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၁ နဲ့ ၂၀၁၂ မှာ Up All Night နဲ့ Take me Home အယ်လ်ဘမ်တွေထွက်ရှိခဲ့ပြီး အခွေသန်းပေါင်းများစွာရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စင်ဂဲလ် What Makes You Beautiful နဲ့ Live While We’re Young တို့ဟာလည်း ပရိတ်သတ်အနှစ်သက်ဆုံးသီချင်းတွေပါ။
၂. ဂျပ်စတင်ဘီဘာ ရဲ့ အိပ်မက်ထဲက လင်းနို့လူသားကားတစ်စီးအတွက်ဆိုရင်
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ နာမည်ကျော်ကြားနေခဲ့ဖြစ်တဲ့ ပေါပ့်အဆိုတော်ဂျပ်စတင်ဘီဘာဟာ သူအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးကားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက လင်းနို့လူသားစီးတဲ့ ကားပုံစံမျိုးပိုင်ဆိုင်ချင်လို့ပါတဲ့။ ဂျပ်စတင်နှစ်သက်တဲ့ကားက Fisker Karma လျှပ်စစ်ကားပါ။ သူ့ရဲ့ ၁၈နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲမှာ မန်နေဂျာ စကူတာဘရောန်က လက်ဆောင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူကြားခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုက အဲဒီကားကုမ္ပဏီမှာ ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့် ကုမ္ပဏီပိတ်ပြစ်ရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်။ ကုမ္ပဏီက နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်မယ့်မော်ဒယ်ဟာ ဂျပ်စတင်အိပ်မက်အမြဲမက်နေခဲ့ရတဲ့ လင်းနို့လူသားစီးတဲ့ကားပုံစံပါပဲ။ ဂျပ်စတင်က သူ့ရဲ့လက်ထောက်တွေကို ကုမ္ပဏီရဲ့ သတင်းအသစ်တွေပေးဖို့အသိပေးထားလိုက်တယ်။ ဂျပ်စတင့်အဖွဲ့ကတော့ မတွေးမဆ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ခွင့်မပြုချင်ကြဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Boyfriend အဆိုတော်လေးဟာ သူ့ရဲ့ Fisker Karma ကားနဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ကာလာဘာဆာ့ 101 Southland freeway မှာ တစ်နာရီမိုင် ၁၀၀ ကျော်အောင် မောင်းနှင်ခဲ့တယ်။ ရဲ က အပြစ်ပေးတားမြစ်တာခံရသေးတာပေါ့။ ဂျပ်စတင်ရဲ့ Fisker Karma ဟာ hybrid ပါဝါပြိုင်ကားမျိုးဖြစ်ပြီး ဖင်လန်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တယ်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၀၀၀ တန်ကြေးရှိပါတယ်။ ငွေရောင်တောက်တောက်ပပ ခရုမ်းသတ္ထုသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပြီး တစ်နာရီအမြင့်ဆုံး ၁၂၅မိုင် မောင်းနှင်နိုင်တယ်။ ၂၀၁၁မှာ ဂျပ်စတင်ဟာ သူ့စိတ်ကြိုက် ပေါင် ၁၀၀ ၀၀၀ တန်တဲ့ Range Rover ကားတစ်စီးဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီကားမှာတော့ အသံစနစ်အတွက်ကိုပဲ ပေါင် ၅၀ ၀၀၀တန်ကြေးရှိတယ်။ အတွင်းမှာ သားရေသားနဲ့ဖြစ်ပြီး ပန်းချီဆေးရေးခြယ်မှုန်းထားပါတယ်။ Cosworth အင်ဂျင်နဲ့ ကားပါ။ တကယ်ဆို Batman စတိုင်လ် Cadillac နဲ့ Ferrari ကားတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ လင်းနို့လူသားစတိုင်လ်ကားတွေကို မဆုံးနိုင်အောင်ကြိုက်နှစ်သက်လှတဲ့ ဂျပ်စတင်ဘီဘာပါပဲ။
၃. နန်းတော်ပန်းခြံထဲမှာ ဂီတသံစဉ်အမျိုးစုံလင်စွာ ခံစားနိုင်ဦးမယ်
ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ပန်းခြံထဲတွေထဲမှာပြုလုပ်မယ့် ပွဲတော်မှာ ထိပ်တန်းအဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ ဝေလ mezza-soprano အဆိုတော်မလေး ကက်သရင်းဂျန်ကင်စ်၊ classical, pop rock အဆိုတော် ရပ်ဆဲဝပ်စန်၊ blues, jazz, folk-pop အဆိုတော် ဂျော်ဂျီယန်ဖွား ကေတီမဲလူဝါ နဲ့ power pop, soft rock အဖွဲ့ Brit Award ဆုရ The Feeling တို့အပါအဝင် ဂီတဖျော်ဖြေမှုတွေရှိနေပါမယ်။ ဘုရင်မကြီးရဲ့ နန်းတက်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖျော်ဖြေမှုတွေပါ။ ဆေလ်ဗီယာလူငယ်ကဇာတ်ကျောင်း၊ Dame Kiri Te Kanawa ဖောင်ဒေးရှင်းက အော်ပရာအဆိုတော်တွေ၊ အမျိုးသားလူငယ်သံစုံတီးတိုင်းအဖွဲ့သားတွေ၊ ဝေလဓမ္မတေးသံစုံကျူးအဖွဲ့Only Boy Aloud အဖွဲ့တွေကလည်း ဂျူလိုင်လမှာ ဆက်တိုက်သီဆိုကြဦးမှာပါ။ ထရမ်းပက်တီးမှုတ်သူတွေနဲ့ ဖွင့်ပွဲတွေကို ဖွင့်လှစ်ကြမှာဖြစ်ပြီး ၁၉၆၀ခုနှစ် ဗြိတိန်မှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ပေါ့ပ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေလည်းပါဝင်ကြတယ်။ ဘဲလေးကပွဲတွေလည်းကပြကြဦးမှာပါ။ လက်မှတ်တွေကို ညပိုင်းဖျော်ဖြေပွဲတွေအတွက် ရောင်းပြီးသလောက်ရှိနေပေမယ့် နေ့ပိုင်းဂီတပွဲတွေအတွက်တွေအတွက် ပရိတ်သတ်တွေဝယ်ယူနိုင်ကြဦးမှာပါတဲ့။ ဧည့်သည်တွေဟာ ပန်းခြံတွေထဲလှည့်လည်ကြည်ရှုပြီး ဈေးဝယ်နိုင်ကြမယ်။ လက်တွေ့ချက်ပြုတ်ရောင်းချနေတဲ့ အစားအစာတွေကိုလည်းမြည်းစမ်းနိုင်မယ်။ ထိုင်ခုံ ၄၀၀ စာအရေအတွက်ရှိတဲ့ မော်ဒယ်လမ်းလျှောက်ပွဲလည်းရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ ပွဲတော်ကို ဇူလိုင် ၁၂ ကနေ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်မှာပါ။ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့ကတော့ တော်ဝင်မိသားစု၊ ကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ တော်ဝင်စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အထူးဧည့်သည်တော်တွေဧည့်ခံကြမယ့်နေ့ပါပဲ။ ဂီတ၊ အနုပညာဖျော်ဖြေမှုတွေ စုံစုံလင်လင်ကြည့်ရှုကြရမှာမို့ ဂီတပရိတ်သတ်တွေကတော့ ပွဲတော်လက်မှတ်တွေအလုအယက်ဝယ်ယူနေကြပါပြီ။ ပွဲတော်နေ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကြည့်ရှုဖို့ စောင့်မျှော်လို့နေကြပါပြီ။
၄. ဂျေဇီ နဲ့ လီယိုနာဒိုဒီကာပရီယို ရဲ့ လက်တွဲမှု
ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော် ဂျေဇီကို လီယိုနာဒိုဒီကာပရီယိုရဲ့ Gatsby အစမ်းပြပွဲမှာတွေ့လိုက်ကြရတယ်။ နယူးယောက်လင်ကွန်းစင်တာက အစမ်းပြပွဲနေ့မှာ အဓိကဇာတ်ကောင် ဂျေဂက်စ်ဘီအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယိုဟာ ပြောင်လက်တောက်ပအောင်အရောင်တင်ထားတဲ့ နက်ပြာရောင်ဝတ်စုံနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ “ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေပါတယ်” လို့ သတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ စာရေးဆရာ ဖရန်စစ်စကော့ထ်ကီးဖစ်ဇ်ဂျဲလ်ဒ်ရဲ့ ၁၉၂၀ ခုနှစ်က ဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာ လာ့ဟာမန်းက ၂၁ရာစုထဲခေါ်ဆောင်ဖန်တီးယူလိုက်တဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ဟာ 3D ဖြစ်သွားတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားတာက ရုပ်ရှင်သီချင်းတွေပါ။ ခေတ်မှီ သီချင်းတွေပါဝင်အားဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက် ဂျေဇီက ပရိုဂျူဆာအဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်လို့ ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ “ဖစ်ဇ်ဂျဲလ်ဒ် က ဂျက်ဇ်သီချင်းတွေကို သူ့ရဲ့ စာအုပ်မှာထည့်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ထပ် ဂျေ က ဂျက်ဇ် နဲ့ ဟစ်ပ်ဟော့ပ်ကို အရောအနှောလုပ်ပြီးထည့်ပေးတယ်။ ဒါ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ခံစားမှုပါ” တဲ့။ ဒေစီဗျူခန်နန်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသမီး မာလီဂန်ကတော့ ဂျေဇီ နဲ့ ကောဇောနက်ပေါ်မှာဆုံတွေ့ရမှာစိတ်ဝင်စားစရာပဲ လို့ဆိုတယ်။ “ဂျေဇီ ဒီပွဲကိုလာမယ်လို့ သိထားပါတယ်။ ကျွန်မလည်းတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပေမယ့် သူနဲ့တွေ့ရင်ဘာပြောရမယ်ခုထိမသိနိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်မ ဂျေဇီကို တစ်ခါမှ မဆုံဖူးသေးဘူး။ ဘာ့ဇ်လာ့ဟာမန်းရဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယိုနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ သီချင်းတွေမှာ ဂျေဇီနဲ့ တွေ့ဆုံရတယ်။ အဲဒါ တော်တော်လေးအံ့အားသင့်စရာပါပဲ”လို့ သူမကပြောပါတယ်။ Gatsby မှာ ဂျေဇီ ဆိုတဲ့သီချင်း $100 Bill, ဘီယွန့်စ် နဲ့ Andre 3000 တို့ဆိုထားတဲ့ Back to Blank , Will.i.am ရဲ့ Bang Bang သီချင်းအပါအဝင် မြူးကြွသွက်လက်နေတဲ့သီချင်းတွေကြောင့် ၂၁ ရာစုထဲက ခေတ်ဆန်ဆန်Gatsby ရုပ်ရှင်ဟာ ပိုလို့ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
၅. အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုပေးပို့မယ့် ဟိုက္ကူကဗျာတွေ
နာဆာအာကာသစခန်းဟာ “message for Mars” ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာတိုလေးတွေရေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ အဲဒီသတင်းစကားဟိုက္ကူကဗျာတွေကိုလာမယ့် နိုင်္ဝဘာလမှာ စတင်မယ့် Maven မစ်ရှင်/ ခရီးစဉ်မှာ ထည့်သွင်းယူဆောင်သွားကြမှာပါ။ ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာက သတင်းစာဆရာမ အဲလစ်ဆန်ဖလာ့ဒ်က ရေးထားပါတယ်။ “အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းက စာပေပြိုင်ပွဲတွေဝင်မပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မကဗျာဟာ လုံးလုံးလျားလျား အနိုင်ရတော့မလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကဗျာရေးနည်း/ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြန်ပြီး အရောင်တင်ရဦးမယ်။ ပြန်ပြီးကြိုးစားရဦးမယ်လို့ တွေးခဲ့တယ်။ အခု “မားစ့်အတွက် သတင်းစကား” အတွက် နာဆာက ဟိုက္ကူကဗျာတွေ ရေးပို့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါပြီ။ အကောင်းဆုံး ကဗျာ ၃ ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ပြီး DVD နဲ့ Maven အာကာသယာဉ်ကနေ ယူဆောင်သွားမှာပါ။ မားစ်စူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေ/ မားစ်စာပေတွေ ရေးသားခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ Kim Stanley Robinson, Ray Bradbury, Philip K Dick, Robert A Heinlein တို့ရဲ့ စာတွေတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲစွဲမြဲနေအောင်ဖတ်ဖူးသားပဲ။ အဲဒီထဲက ရော်ဘင်ဆန်ရဲ့ မားစ်အကြောင်းရေးထားထားအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ “ကောင်းကင်ကြီးက ပန်းရောင်တွေပြေးလို့ ကြေးနီရောင်သဲမှုန်တွေလည်းပြည့်လို့၊ ကြွယ်ဝတဲ့အရောင်အသွေး၊ တွေ့ဖူးသမျှဓါတ်ပုံတွေထဲကထက် ပိုပြီး သိမ်မွေ့နေသေး” စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီ ပြိုင်ပွဲအတွက် ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို လာမယ့် ဇူလိုင်လ၁ ရက်နေ့အထိ ပေးပို့နိုင်မှာပါ။ ၁၅ ဇူလိုင်မှာ မဲပေးရွေးချယ်သွားကြပါမယ်။ ဟိုက္ကူကဗျာတွေချစ်တဲ့ ဘယ်သူမဆို ပေးပို့နိုင်ကြတယ်။ ရှင်တို့ရဲ့ “မားစ်အတွက် သတင်းစကား” ဟိုက္ကူကဗျာလေးတွေ ရွတ်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မရေးထားတဲ့ ကဗျာလည်းရွတ်ပြမှာပေါ့” လို့ သူမကဆိုတယ်။ www.nasa.gov ရဲ့ News Releases စာမျက်နှာမှာ ပြိုင်ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၆. Lady Antebellum ရဲ့ ရွှေရောင်သမ်းတဲ့ ကမ်းထရီးအယ်လ်ဘမ်သစ်
၂၀၁၂ ဂရမ်မီဆု အတွက် Own the Night နဲ့ အကောင်းဆုံးကန်းထရီးအယ်လ်ဘမ်ဆုရှိခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ကန်းထရီးပေါပ့်ဂီတအဖွဲ့ Lady Antebellum ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်အယ်လ်ဘမ် Golden ကို မေလ ၇ ရက်နေ့က ထွက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီအခွေထဲမှာ “honey-soaked love letter” က နောက်ဆုံးသီချင်းဖြစ်ပြီး သီချင်းတွေကို အဖွဲ့သားသုံးဦးဖြစ်တဲ့ ချားလ်စ်ကယ်လီ၊ ဟီလာရီစကော့ထ် နဲ့ ဒေ့ဗ်ဟေးဝုဒ်တို့ကပဲ ရေးထားကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ သီချင်းရေးဆရာ အဲရစ်ပါစ့်လေကိုတော့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ကယ်လီရဲ့ အိမ်မှာသီချင်းတွေရေးကြတယ်။ ဝိုင်သောက်ရင်း ပီဇာစားရင်း သီချင်းတွေရေးခဲ့ကြတယ်။ သီချင်းကောင်းတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ မြန်မြန်ပဲရေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်။။ ဥပမာ “Need You Now” လိုသီချင်းဆို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးရေးနိုင်ခဲ့ကြတာပါလို့ ကယ်လီကပြောပါတယ်။ “Golden” ကို အယ်လ်ဘမ်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တာကတော့ အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုလုံးအတွက် အဓိပ္ပါယ်ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြစ်နေလို့ပါ။ လေပြေလေညင်းတိုက်ခတ်နေတဲ့လမ်းမပေါ်က ခရီးတစ်ခုဟာ စိတ်နှလုံးကိုနွေးထွေးစေတယ်။ အဲဒါ ရွှေရောင်သမ်းနေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲလို့ ဆိုတယ်။ Lady Antebellum အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၈ မှာ အဖွဲ့နာမည်နဲ့အယ်လ်ဘမ် Lady Antebellum, ၂၀၁၀ မှာ Need You Now, ၂၀၁၁ မှာ Own the Night, နဲ့ ၂၀၁၂ မှာ ခရစ်စမတ်အယ်လ်ဘမ် On This Winter’s Night နဲ့ အခု Golden အယ်လ်ဘမ်တွေထွက်ရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလကစလို့ ဟေတီက မသန်းစွမ်းမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်၊ ထောက်ပံ့တဲ့ အဖွဲ့ myLifepeaks မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ကန်းထရီးဂီတကို ချစ်မက်မြတ်နိုးတဲ့ဂီတပရိတ်သတ်အတွက်တော့ လက်မလွှတ်တမ်းဝယ်ယူနားထောင်ကြဦးမယ့် အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုပါပဲ။
(ရတီမဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၃)
ကိုယ့်ရဲ့ ကားကို လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ မြန်မြန်ဆေးေ...
ဘာလီ ကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ ပျော်စံရာ ကျွန်းမြတ်မဟာ...